ချက်တင်ကစားတဲ့အွန်လိုင်းနှင့်အတူမိန်းကလေးများ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
ဒီမှာအကောင်းဆုံး ဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူၡမ်ားယောက်ျားတွေအများသူအမျိုးသားများအားကစားကိုချစ်မြတ်သွင်လိင်အတွက်ဆှဗီဒီယိုချက်တင်ပဲ။ ဒီနေရာမှာသင်ရှိသည်နိုင်အခမဲ့ဆှဝွက္စြာဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူချောမောလေးယောက်ျား၊အဖြစ်များစွာသောအခြားအခမဲ့ဆှလိင်ဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒီနေရာမှာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်မှန်ကန်စာကြောင်းဆှ၊Striptease၊လိင်နှင့်လိင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆှလိင်ဗီဒီယိုချက်တင်ဘဲ။ အကြိုက်ဆုံးဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်ပျော်မွေ့မမေ့နိုင်သောသွင်လိင်အွန်လိုင်းနှင့်လုံးဝအခမဲ့။ ရဲရင့်တက်ကြွနှင့်အရသာရှိပါတယ်၊မင်္ဂလာရှိနှစ်ချွတ်ပြသနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့အဝတ်အချည်းစည်းခန္ဓာကိုယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဆှဗီဒီယိုစကားပြောနိုင်နှင့်တွေ့ဆုံအလွန်အဆင်းလှသောနှင့်ကြွက်သားအားကောင်းလိင်၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားသောသူယောက်ျားတွေကယ့်ကိုအတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်Eroticism။အကောင်းဆုံးကောင်လေးတွေဟာပျော်ရွှင်သွားသင်ကမ္ဘာ၌အချစ်အလိုဆန္ဒနှင့်။ ထူးခြားတဲ့နှင့်ချစ်ခင်သောအထီးတတ်နိုင်သမျှသင်ညှို့၏မယုံပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ့်ဗီဒီယိုချက်တင်၊အဖြစ်လာနိုင်ပါသည်အထူးလူတစ်ဦး၏အိပ်မက်များ၏အသည်းအသန်စကားလက်ဆုံအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အတူသာ။ မှုနှင့်သင်လိုအပ်သမျှတစ်ဦးကမ်။ အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအတွက်စကားပြောနိုင်ဦးကြိုပြုခြင်း-လိင်၊ကျောင်းသားများ၊ဂင္း၊ဖျော်ဖြေရေးနဲ့အခြားသူများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆှဗီဒီယိုချက်တင်အားလုံးပါဝင်၏မတူကွဲပြားမှုကိုအထီးလိင်ကမ္ဘာပေါ်လာပြီးနောင်တမရကြဘူး။ ခရီးအမျိုးအစားဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ၊သင်နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်အားလုံးသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်။ ပူပြင်းတဲ့အထီး Striptease-ကြိုးစားမှလွှတ်ပေးရေးကိုအလေးတစ်ဦးတည်းနှင့်အတူအလိုရှိသောအကြံအစည်အတွက်အမှန်တကယ် idyll။ အခမဲ့နှင့်စျေးနှုန်းသက်သာသောဝန်ဆောင်မှု၏အများဆုံးနှစ်လိုဖွယ်အမျိုးသားများအပေါ်ဂြိုဟ်သည်စောင့်ဆိုင်းသင်တို့အဘို့အခပ်သိမ်းသောမိနစ်များ၏ရှေ့မှောက်၌မှန်ဘီလူး၏အဘျ။ ခံစားတစ်ဦးကဖော်ရွေလေထု၊အညှို့ၡမ်ားျပာပါတယ္။ အံ့သြဖွယ်စွန့်စားစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ပေါ်သင်တို့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရင်းအမြစ်များနှင့်ပေါက်တဲ့နေရာ၊ဥပမာအားဖြင့်၊သင်အလွယ်တကူတည်ထောင်သောသဘောဆက်သွယ်ရေးများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊တစ်သာယာသောအားလပ်ရက်၊အားလပ်၊ သန့်နှင့်အများကြီးပို။ အမှန်တကယ်သဘောအကျွမ်းနှင့်အတူတစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ချစ်စရာကောင်းအဖော်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသည်သယံဇာတအရင်းအမြစ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ဤအမျိုးမျိုးသောအရင်းအမြစ်များဖို့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းအလှဆင်၏အထီးကျန်နှင့်အပေါ်ထားရန်အမှန်တကယ်ပြသ။ ဒီနေရာမှာအမျိုးအစားအတွက်ဆှဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ၊အွန်လိုင်းတင်ဆက်ထူးခြားသောဆှလွှမ်းမိုးသောမေတ္တာကယောက်ျားတွေပြသသင်အွန်လိုင်း။ လည်း၊အများအတွက်ကိလေသာနှင့်လူကြိုက်အရသာရှိသောအမည်မှာသေချာပါသည်မှအယူခံ။ လောကသို့ငုပ်အဒိတ်၊စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏အသက်တာမှတပ်မက်နှင့်အလိုဆန္ဒ၊ငုပ်သို့ပြန်၏ကမ္ဘာ့အအိပ်မက်ကိုဖြစ်လိမ့်မည်စဉ်ဆက်မပြတ်စူးစမ်းလေ့လာဖို့၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂျီနှင့်သင်၏အံ့သြဖွယ်စိတ်ကူး။.
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ကလေးတစ်ဦးမှဇက် အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်တစ်မိသားစုမစတင်။ ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အားလုံးကိုရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများမှဇက်၊ပူးပေါင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ရွေးသင့်ဒေသမှစာရင်းကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်အဘို့အပိုအသေးစိတ်အလိုက္သက္ေ။ ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ကလေးတစ်ဦးအမှဇက်အတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ဦးမိသားစုစတင်။ ကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အားလုံးကိုရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများမှဇက်၊ပူးပေါင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။ ရွေးသင့်ဒေသမှစာရင်း၊သို့မဟုတ်အပေါ်တွင်နှိပ်ပါအမြင်မှအသေးစိတ်အထူးပြု၏အစီစဉ်သူများ'အစားအသောက်။ အထက်တန်းကျောင်း၏ဝင်ပေါက်အစီအစဉ်။ အတူအသက်ရှင်။ သူကလက်ထပ်သည်။ သမီး Yesenia သည်တနှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲအရွယ်ပါ။ အလုပ်။ မရှိဘဲအန္တရာယ် prefs။ အရပ်ရှည်ရှည်၊သွယ်နဲ့လှပတဲ့လူငယ်၏မိခင်နှင့်အတူလှပသောမင်းသ ၉ အသက်အနှစ်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊အများ၏တိုးတက်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသောကျွန်တော်ထင်လိမ့်မည်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းကို ၁၈ ကွာရှင်းဂျက်လေယာဉ်အမျိုးသမီးရှာဖွေနေသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ငါ၏အမြင့်သည် ၁၈၃ စင်၊ငါ့အမှုအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်ငါအတွက်စေ့စပ်နှံ၊စာရင်းကိုင်။ ငါဖြစ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်၊ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်သာယာသောနှင့်စာနာ၊အစဉ်မပြတ်ငါနားလည်သဘောပေါက်နှင့်အထောက်အပံ့အတွက်မည်သည့်အခြေအနေ။ အခြေအနေ။ သစ္စာဖောက်ဘယ်တော့မှအမြဲစိတ်ရင်းမှန်။ မေတ္တာကိုသင်ယူခြင်း၊ကိတ်မုန့်ဖုတ်စက်ဘီးစီး။ ငါ့ဆင်မြန်းအတွက်အားနည်းချက်များနှင့်နှင်းစု။ ကၽြန္ုပ္၏၊ငါနိုင်ကြောင်းပြောပါရေ။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့ကြောင်းသိရေ? ငါ့နာမကို Karina။ ငါ ၂၂ နှစ်အရွယ်။ ငါသမီးတစ်ဦး၊သူမ၏၉ လသားအရွယ်အနေဖြင့်သင့်ရဲ့စူပါဖွဲ့၊တစ်မူလတန်းကျောင်းဆရာ။ ငါဖတ္၊ငါအရာအားလုံးကိုဖတ်ဖတ်။
ရှိပါတယ်လုပ်ဖို့အများကြီးသာ။ မြို့ပြနှင့်ခေတ်သစ်အဖြစ်၊အဖြစ်အစဉ်အလာ။ အဲများမှာအမျိုးသားပန်းခြံနှင့်အလှရှုခင်းခံစားဖို့။ သူတက်ကြွစွာအလုပ်အတွက်သုံးကောင်း၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားလပ်ရက်အပေါ်သွား၊ဒါကြောင့်အစွန်းရောက်။ အကြီးဆုံးလူမှုကွန်ယက်ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ခဲ့သော၊အပြန်အလှန်နှင့်အတူထက်ပို။၄၈၉ သန္း။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့နှင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သစ်ကိုမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်း။ မြို့သည်လှပဆုံးနေရာများမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ပြဇာတ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တင်နိုင်ပါသည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်း၊ရှယ်ယာဓါတ်ပုံများနှင့်တွေ့ကြုံနှင့်အတူအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အများကြီးပို။ ကျေးဇူးအများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘယ်သူသည်ပူးပေါင်းပြီးနေ့တိုင်း။"ဖရဲ"နှင့်စေသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းပိုပြီးပျော်စရာ။
အိမ်ထောင်သည်၊ ပူပန်ထောင်၊ထောင်၊စသည်တို့ကို။ နှင့်အတူနိုင်ငံခြား။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ပြည်သူ့အခုဖန္တီးျခင္းချစ်စရာတင်းများ"မင်္ဂလာဆောင်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်အသက်တာ၏အီတလီနိုင်ငံ"။ အဖြစ်မှန်အတွက်၊ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ"အလက်တင်"ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ဒါပေမယ့်လူအများစုအတွက်အတြက္အစည်းအဝေးအမှတ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့အမျိုးအစားဆိုက်တွင်အင်တာနက်ကိုဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်၊ဒီမှာဖတ်အကြောင်းတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ကရေပန်းစားသည်အီတလီနိုင်ငံလုပ်။ များများနေဆဲရှိပါတယ်အရင်းအမြစ်များအတွက်ရောနှင့်ရှာဖွေမိတ်ဖက်၊ပင်လူကြိုက်များအီတလီအတွက် ၊ဒါပေမဲ့ဒီဇာတ်လမ်းကအီတလီအစွန်အဖျားသော၏ကျယ်ပြန့်အများစုအဆိုဒ်များနှင့်လီေမနက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဆိုက်ထားသောအဆင့်မြင့်ရာထူးလိုင်းအောက်ဆိုက်နှင့်အဆိုဒ်အကြောင်းကျွန်တော်အကြံပြုထောက်ခံမဟုတ်အၾကိဳက္ေ။ တကယ်တော့၊လက်ခံရရှိသတင်းစကားကနေသောသူမိန်းကလေးများလက်ထပ်အီတလီမှာသို့မဟုတ်တွေ့ဆုံစဉ်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ပြင်ဆင်နေ၊နှင့်ငါစားရဘူးသောဆိုက်ဖြစ်ပါသည်အလင်းသို့မဟုတ်အပြက်အချော်၊ မှကြွလာသောအခါအမျိုးသားများ။ ဤသည်အီတလီနိုင်ငံ။ ရှိပါတယ်အခမဲ့သူမြားကိုအမျိုးသမီး၊အခမဲ့သူများအတွက်အမျိုးသားများအတွက်၊နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်သူတွေကိုကြိုးစား။ ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ်၊သင်ပြနေတဲ့ဓာတ်ပုံသင်ပုန်း။ အဲသာဗီဒီယိုချက်တင်အတွက်အီတလီ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်အဖုံး၏။ ဒီတော့ဝေး၊ဒါကြောင့်ရေးအတွက်အီတလီ။"မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့၊ရှေ့ဆက်သွား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တည်ရှိသည်မော်လ်တာ၊မော်လ်အသေးငယ်တဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်း၏အီတလီနိုင်ငံနီးစူ။ ဒီအဆိုက်ကိုသုံးခြင်းကပိုပြီးတောင်းဆိုမှုများထက်သင်တန်းအတွက်ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်-"ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူကင်ဆာရောဂါလူနာနှင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့၏စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ရုရှား"။ နောက်တဖန်အ၊အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်ရုရှား-အီတလီအမျိုးသားများ။ ငါဘယ်လောက်မသိရပါဘူးလူအတော်များများမှာအိပ်ပျော်သောအရာကိုနှင့်အတူတစ်ရုရှားမိန်းကလေးတစ်ဦးအဘယ်သူ၏ခင်ပွန်းသည်အစအဦးဖွဲ့စည်းရန်။ ချိန်းတွေ့အားဖြင့်အရပ်သို့နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ သင်သည်လည်းအချိန်အများကြီးဖြုန်းဒီဈေးကွက်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူတစ်ဦးရုရှားလူ၏တူညီသောအသက်အရွယ်၊အီတလီ။။။။ေဤသည် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက်"အဘ"နှင့်"သမီး"၏အမွားမ်ား။ ဥပမာအားဖြင့်၊အတွက်-တ။ သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အခြားနိုင်ငံများအတွက်အနူးအဆိုဒ်စာမျက်နှာ။ အားလုံးဒိုမိန်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းဆိုက်မှာအနည်းဆုံးနှင့်ဥရောပ။ တခြားဆိုဒ်အမည်များသည်ဒိုမိန်းယူမှလျှောက်ထားကနေဒီနိုင်ငံ-ဗြိတိန်နိုင်ငံအမည်တွင်ဖော်ပြထားသောအမျိုးအစားထားတဲ့အတွက်ဒီဆိုဒ်စီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်။ ဤသည်မှာလည်းအလွန်အရေးတစ်ခုအဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ထောက်ခံချက်။ ရန်ဘူးဆိုရင်ဆက်သွယ်ဆိုက်၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပေးပါ။ ကျွန်မအကြောင်းသင့်ပြောနှင့်အမှု၏တစ်ဦးလူကြိုက်များပီျ၊သို့မဟုတ်ဆိုက်တစ်ခုအက္ပ္မ်ားသာအခါသင်လုပ်နိုင်ဘူး။ အခုဆိုဒ်အများအပြားလည်းဒီအစွမ်းအပြားအတွက်လျှောက်လွှာသမ်ား၊ဒါပေမဲ့အဲဒီနှစ်ခုကုမ္ပဏီကြီးအတွက်နောက်ခံအရောင်၊နှင့်အခြားသူများ။ လက်ရှိတွင်ရှိပါတယ်၊ကြီးမားတဲ့အရေအကေးရှင်းကအသုံးပြုကြသည်သောလူတိုင်းမှမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုမိုဘိုင်းဖုန်းများမှဂြိုဟ်တုဖုန်းများကိုကွန်ပျူတာ။ ဤကိစ်စတှငျ၊လူကြိုက်အများဆုံးပလီကေးရှင်း အဘို့အချိန်းတွေ့အတွက်အီတလီ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားအရှာဖွေနေ၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့နှင့်ထွင်းအီတလီနဲ့အီတလီစိတ်နှလုံး၊ယခုမှလာကလပ်ဖခင်လျှင်အမည်အညိုရောင်အိတ်၊တူးတဆင့်အပေါငျးတို့သစာမျက်နှာများတွင်ကိုဖန်တီး။.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာလူတိုင်းဆက်သွယ်ရေးကိရိယာနှင့်။။။ဒီမှာလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုချက်တင်ကနေရုရှားနိုင်ငံ၊ဘီလာရုစ်၊ယူကရိန်း၊ ဂျာမနီ၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ လူလာမွအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ သငျသညျရှေးခယျြနိုငျအသစ်တစ်ခုကိုကျွမ်းရာဟုခေါ်သည်။ အားလုံးစစ်မှန်သောဆက်သွယ်ရေးသင်တို့အဘို့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်အီးမေးလ်နှင့်ပက်သတ်။ ထိုသို့တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ကနေတဆင့်ကမ်မရှိဘဲအကြမ်းဖက်မှု။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မည်ဝှက်အတွက်အသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်အုပ်စုချက်တင်။ ဒါဟာအားလုံးမူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းအဘို့အစာပေးစာယူနှင့်အသံ-ဗီဒီယိုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာလူတို့နှင့်အတူတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူလူ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊သင်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်သူအသင်ပြောပြချင်။ သင်တို့သည်လည်းသတ်မှတ်သောအက်ားလူတစ်ဦး၏မြင်ချင်။ အဆိုပါအလွန်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်။ အဘယ်သူမျှမရရှိနိုင်။ မရှိရက်စွဲများ၊ဒါကြောင့်သင်တွေ့ဆုံရန်လူများစွာသင်လိုချင်တဲ့အတိုင်း။ မက်ဆေ့ခ်ျများလျက်ရှိသည်။ ငါလွဲချော်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ပါလိမ့်မယ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူ။ ခေါင်းစဉ်-ႏွင့္ ၊၊သင်ရနိုင်တဲ့ဖုန္းနံပါတ္။ ဖြစ်လာ။ ဤသည်အစာရှောင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ရပ်နိုင်အောင်အဆွေခင်ပွန်းသုံးယောက်နှင့်နေဆဲလက်ထပ်။ ဒီ ယ့္သာ။ သငျသညျကိုအသုံးပွုနိုငျချက်တင်နှင့်ကစား၊စာသားအတွက်ဆက်သွယ်ရေး၊အသံ၊ဗီဒီယို။ သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူမည်သည့်လူအပေါ်။ လျှင်သင်လုံလောက်တဲ့မရနိုငျလူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏၊သင်ရလိမ့်မယ်ပင်ပန်း၏အခြား၊ဒါကြောင့်ရပ်တန့်နှင့်ဆက်သွယ်မှာသူတို့ကိုထိတွေ့။ ဒါကြောင့်ပဲအသစ်ချက်တင်အဖြစ်အသစ်တစ်ခုကိုပြသ။ သူဖြစ်ပါသည်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလှအပခဲ့ဖို့လုံလောက်ကံမကောင်းရဖမ်းမိ။ အဓိကအရာတစုံတခုသောအခါ၊ဆက်သွယ်ခြင်းအတွက်အမည္မေမဖြစ်လုံးဝပျက်။ သင်ရေးသားနိုင်အသုံးပြုသူအမည်၊စကားဝှက်ကို၊သို့မဟုတ်ပို။ လည်းရှိပါတယ်၊သောဆိုဒ်များကသင်ပြုပါရန်ခွင့်ပြု။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အားသာချက်ကတော့ဗီဒီယိုချက်တင်အခမဲ့။ လ္အဆင့်အတန်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲကြသောအခါ"အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်"၊ကျနော်တို့အသုံးပြုခဲ့၏အခြေခံမူများနှင့်အနည်းငယ်မျှသာကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်အများဆုံးနိုင်စွမ်း။ သင်ချင်တယ်ပို့ပုံရိပ်တွေ။ ဒီလိုတင်ပြတာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချိန်းတွေ့လီေကးရွင္းဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်စမ်းချောင်းဗီဒီယိုချက်တင်ကနေတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့အန္းဖုန်း။ ချက်တင်ကစားတဲ့:အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်-တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကမ်ကြောင်းအကြံပြုသင်သည်အဝေးမှထိန်းချုပ်ရေးပိုလွှဗီဒီယိုတည်းဖြတ်အသံဖိုင်ကနေချန်နယ်၏။ ကစားတဲ့စကားပြော:အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အကောင်းဆုံးနှင့်င္ငံတကာချက်တင်၊ဝက်ဘ်ကမ်၊သင်ကူညီပေးသည်ကျပန်းစကားပြောနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊လူသစ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်ဖွံ့ဖြိုးသင့်ဘာသာစကား၊ကိုယ့်သင့်အသက်တာပိုအဆင်ပြေပြီးလွယ်ကူ။ ဒီချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအသင့်ဖြစ်ကြကိုကျေနပ်။ ကျနော်တို့တင်ပြဗီဒီယိုချက်တင်အက္ပ္ကိုကစားတဲ့။ သင်သည်လှည့်နိုင်၏နောက်သို့ချိုးဖျက်တစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စကားပြောဆို။ အကြောင်းပြောဆိုနှင့်အတူဘာမှမ။ လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊မေးခွန်းများကိုမေးပါ၊ရှယ်ယာလျှို့ဝှက်ချက်များ၊သို့မဟုတ်ပဲသတ်အချိန်။ ဤအက္ပ္ကိုခေါ်ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အားငါပေးမည်၊တောက်ပတဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်လူမျိုးအတွက်အမည်တွင်တစ်ဦးအပြုသဘောလမ်း။ ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်စကားလုံးခ်ိတ္ဆြဲရန္စာကြောင်းဖော်ပြရန်အတြက္၊သင်ကူညီဒီဂိမ္းမ်ားႏွင့္အက္ပ္မ်ားပိုပြီးအခြား ။
မင်္ဂလာပါအားလုံးအမေရိကန်၊ရုရှားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးပူဇော်သောသူသည်အပြည့်အဝအကွာအဝေးဝန်ဆောင်မှုများကိုများတပ်ဆင်၊ပြုပြင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ္ရံုေယာမ်ား(ေလေအးေပးစက္၊အုပ်စုခွဲစနစ်များ)၊ရေခဲသေတ္တာရေခဲသေတ္တာထဲမှာပလပ်စတစ်ပုံး၊အဖြစ်ကိုကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်စနစ်များ။ ငါ့ကိုပြောပြပါကျေးဇူးပြုသောအတွက်အမှုပေါင်းငါရောင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးပါပဲ။ ငါ၏အတိုက်ခန်းတစ်ခန်းတွင်တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်သောအိမ်၏ဆင်ခြေဖုံးတွင် အတွက်နှစ်လ၊ဖြစ်နိုင်ရင်အခြေမအပေါ်၊ပင်လယ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုမြင်ရွေးချယ်မှုများ။ မင်္ဂလာပါအားလုံးမှကျောင်းသားများကိုသင်ပေးခဲ့မှာစပိန်၊အင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျာမန်။ ရှစ်နှစ်သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံ။ ငါဒီဂရီရှိသည်။ ပစု၊ဘာသာပြန်။ မက္ကစီကိုစီးတီး။ အသေးစိတ်အချက်အလက်၊ငါသည်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ပါက အလှပြုပြင်ခြင်း၊သင်မူကား၊အသိခံစားနေကြလျှင်၊မျှဝေကျေးဇူးပြုပြီးဤအချက်အလက်များ(ဥပမာ၊အဘယျသို့တဲ)။ မင်္ဂလာပါ၊ဒီဇင်ဘာလအတွက်မက္ကစီကိုစီးတီး၊ထို့နောက် ။ အထွေထွေအတွက်၊၏အဆုံးဒီဇင္ဘာနှစ်ခုလိုပါအိမ္ျသာ (လေပိုကောင်းလေအနည်းဆုံးတစ်ခုနှင့်အတူမီးဖိုချောင်ထောင့်)အတွက်အတိအကျလေးလ၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျန်ရစ်၏အစအဦးဖြစ်စေခြင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်နံနက်ကောင်း၊ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးအာမခံအကျိုးဆောင်-ငါကူညီပျော်ရွှင်သင်ရွေးချယ်တဲ့မူဝါဒရွေးချယ်စရာများအတွက်သင့်လျော်သောလွှမ်းခြုံအတွက်မက္ကဆီကိုနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ ကျနော်တို့အကူအညီနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၊မိသားစု၊မူဝါဒရွေးချယ်မှုများ၊တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်ကလေးများအတွက်အ၊နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ။ ငါရေးပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ဒီနေရာမှာကူညီဖို့အသေးစိတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရေးကနေရုရှားနိုင်ငံ၊လီယန်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်တို့အဘို့အရှာကြသည်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့၊လူသိများအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ယံသဘာဝအလှကုန်"ဟုခေါ်"၊ချီးမြှင့်မှာရုရှား။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်လုပ်နည်းနှင့်စျေးနှုန်းသက်သာထုတ်ကုန်များ ဖြေရှင်းဖို့အဓိကတာဝန်များကို၏မျက်နှာ၊ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဆံပင်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးအော်ဂဲနစ်နှင့်သဘာဝအစိတ်:ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ၊ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကောက်နှုတ်ချက်များ၊နံ့သာမျိုး၊မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်များ၊သောငါတို့သည်ဖြစ်ကြ၏မာနထောင်လွှားနှင့်နိုငျသောကင်းကင်းတင်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာက္ဖိုတွက်ရုရှားနှင့်ပြည်ပမှာ၊အဖြစ်မှနိုင်ငံခြား။ ဖြစ်ကောင်း၊အားထုတ်လုပ်မှုဆိုင်များ၊ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ရုရှားသဘာဝဆပ်ပြာနှင့်အလှကုန်-"ကောလိပ်စုဆောင်းခြင်း"၊မော့နာမည်ကျော်ရုရှားအနာရောဂါငြိမ်းစရာအစဉ်အလာသည့်အတွက်ကောက်ခံသည့်အသက်တာ၏အင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်၏အမှုဆောင်အတုလှုရွှံ့စေးဂေစိန့်- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အရည်ပျော်ရေအရင်းအသဲကန္တာရ၊သည့်နေရာသမိုင်းကြောင်းအရွပ်ပေါ်သည်ထင်ရှားအခြေခံအကျဆုံး၏အမိ၏။ အားလုံးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီအကောက်ခွန်ပြည်ထောင်စု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စု:အကြှနျုပျ၏မိတ်ဖက်ပြင်သစ်တွင်ရှိအဆက်အသွယ်နှင့်အတူကျောင်းမက္ကစီကိုအတွက်၊ငါသည်မေးခဲ့သည်ကိုကူညီဖို့ဒီတက္ကသိုလ်ပြင်ဆင်ဇာစာရွက်စာတမ်းများဒါကြောင့်သူတို့လာဖို့ပြင်သစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌အဘို့။ ကျွန်မသွားချင်မှမက္ကစီကို။ အရိုင်းခရီး၊ငါသည်အဘယ်သူမျှမခရီးစဉ်၊အစီအစဉ်မရှိ။ ငါလာမှနိုင်ငံအသက်ရှင်လျက်၊ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မအလုပ်-နေထိုင်သည့်အခါကျွန်မနေထိုင်ခဲ့ဆောင်းပါးများနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ထိုအခါမူကားငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အဗီဇာ။ အခုကျွန်တော်သိချင်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဤပန်းချီနောက်တဖန်အ၊ငါကဲ့သို့အသက်။ မက္ကစီကိုအတွက်၊ဒါကြောင့်လည်းတန်ဖိုးထားကြသည်၊အားလုံးအကြောင်းအရာမျိုး။ ဒါကြောင့်ငါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ည့္မႈမ်ားကျေးဇူးတင်များအတွက်မည်သည့်အကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့အတွက်မက္ကစီကို-တစ်စုံတစ်ဦးကူညီနိုင်အလုပ်မှာ၊တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအိုးအိမ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့)၊စသည်တို့ကို။၊ သို့မဟုတ်ရုံအရအဆိုပါကုမ္ပဏီကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်တရာဒေါ်လာတစ်ပါတ်နှင့်၊အုပ်စုတစ်စုအပေါ်အသေးစိတ်ငါ့။။။။။ ကောင်းသောအနံနက်လူတိုင်း
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကောက်ယူပါပြီအပေါင်းတို့သည်ဗီဒီယိုများအကြောင်းသင့်ခရီးစဉ်မှမက္ကစီကို။ အားလုံးကိုပေးအပ်သည်ဗီဒီယိုများတည်းဖြတ်အကူအညီဖြင့်ယာဉ်၊ကျနော်တို့ကသာအကောင်းဆုံးခရီးသွားဧည့်သူလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်လမ်းညွှန်၊ခရီးသွားမှဒီနိုင်ငံ။ အားလုံးအလွန်အသုံးဝင်သတင်းအချက်ကပွဲအတွက်မက္ကကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်သင်အွန်လိုင်းအခမဲ့။ မည်သူမဆိုလိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မက္ကသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးရင်းနှီးသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူအပေါငျးတို့သအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များများအတွက်တည်းခိုဒီနိုင်ငံ။ ကျွန်တော်တို့အချိန်အများကြီးစုဆောင်းရန်လိုအပ်နှင့်အသုံးဝင်သောဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ။ ဒီနိုင်ငံနိုင်တယ်ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ဒါပေမဲ့သိတဲ့အခြားနိုင်ငံမဟုတ်သာ၊ဒါပေမယ့်လည်းတစ်အန္တရာယ်။ ချင်သောကြောင့်၊ငါတို့သည်သာခံစားရသောခရီးသွားလာ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုမက္ကစီကိုအတွက်သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်၊အဘယ်သူမျှမဗိုင်းရပ်စ်နှင့်မျှရုရှားဘာသာစကားကို-အားလုံးသည်ဗီဒီယိုများရရှိနိုင်သောဖြစ်ကြောင်းအခမဲ့အဘို့။ အသီးအသီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်၏ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကြည့်ဖို့အရာအားလုံးရှိသည်။ ကျုဗီဒီယိုကခရီးသွားလာဖို့မက္ကဆီကိုအရင်ကဆိုရင်များအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဒီမှာအွန်လိုင်းအခမဲ့။ ကျနော်တို့ရှိသည်ကိုပြုစုစုဆောင်းမသိတဲ့သူအဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူချင်။
နှစ်ဦးမိန်းကလေးများ ၁။ မြစ်မိန်းကလေးငယ်အုပ်စုချက်တင်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် ၂၁၈၀ ပွဲကြည့်ပရိသတ်၂။ ပုဂ္ဂလိက ၁-တြင္-၁ ချက်တင်နှင့်မိန်းကလေးများ ၇-၂၂ အလှအွန်လိုင်းပေါ်မူတည်တယ်အချိန်ပမာဏအမည္မေဧည့်ည့္ခမွတ္ဘော့များအတွက်အခမဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်ခြင်း:၈၀ လွှင့်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊နှင့်အဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များရေးမက်ဆေ့ခ်ျများအားဖြင့်အခမဲ့အဘို့အပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်မက်ဆေ့ခ်ျများအတွက်။ ဒါကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ၁။အမှု၌သင်တို့မလွှင့်နိုင်ငံ့၅၆၀ ကနေမိနစ်အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်၊ပင်နှင့်အတူအဆက်မပြတ်အကုန္တင္၊နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ပြုသောအမှုနိုင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၂။ သငျသညျပေးပို့နိုင်ပါတယ်အီးမေးလ်လင့်ခ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လင့်ထားသည်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်း၊အပြန်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်နိုင်လျှင်မဟုတ်မှတ်တမ်းအတွက်အသံဖမ်းနှင့်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲဝန်ဆောင်မှု.
အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲလှပါ၏အဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊အဆိုပါသစ်ခွအချပ်ငါ့ဝိညာဉ်၏အဖြစ်မကြာမီငါထိအဖုံးအုပ်၊ဒါပေမယ့်ဒါဟာငါ့အချစ်ကြောင်းသင်တို့အဘို့ပူနွေးလာသည်။ က်းဇူးျပဳ၍ဒီဟာတစ်ကြိမ်မှာခြေလှမ်း။ ဒီအပညာရှိတဲ့ရွေးချယ်မှု။ ကျနော်ကတိပေးဖို့စမတ်ဖြစ်နှင့်ရိုသေလေးစားမှုအတွက်အရာအားလုံးကို ဆက်ဆံရေး။ ဖန်တီးအပြီးတစ်ဦးငြီးငွေ့နယ်မြေဟာအစီအစဉ်-ငါသည်မသိရပါဘူးအဘယျသို့တကယ်အချင်တယ်၊ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချစ်ရဲ့အဖြေ-ခေါင်း-တောင်အသစ်ပတ်ဝန်းကျင်၊သူလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အခက်မဖြစ်သင့်ငြီးငွေ့၏၊ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သင့်သည်လုံခြုံ၊အေးဆေး။ အဆိုပါမရှိခြင်း၏မြေခွေးခြင်္သေ့။ မဝယ်ပါနဲ့စာအုပ်နှင့်အတူပိုက်ဆံနဲ့ဉာဏ်ပညာ။ မဝယ်ဘူးမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူငွေရှာ။ ဝယ်ယူနှင့်အတူငွေရှာ-မရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအတွက်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း၏အမှုအရာ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ဝယ်နိုင်ပိုက်ဆံနှင့်အတူယခုရရှိနိုင်အဖြစ် ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ဝယ်နိုင်ငွေယခုရရှိနိုင်အဖြစ် ။ သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်၊ရုံသင်သည်ငါ့ကိုယုံကြည်။ ငါတိရစ္ဆာန်များ၊အပွင့်-အတူကောင်းကင်။ ငါအဲဒါကိုမျှော်လင့်တာပါ။ငါသည်ယုံကြည်စိတ်ချရယ်နဲ့ကျွန်မလိုချင်နိုင်မှအတူတကွနေထိုင်။
သင့်ရဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သင်တို့၏ဝမ်းနည်း။ မြံခိုင်ခံ့သောဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မင်ရင်းနှီး။ ။ ကြောင့်ဒီနေရာမှာရနိုင်မှသာမှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းမှဒေသအားလုံးအခမဲ့။ ဒေသ၊ မှတ်ပုံတင်နှင့်ဆိုက်၏အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာသည်အဆိုပါဒေသ၏နေအိမ်သို့များ၊နှင့်အခြားဒေသများ။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းဖန်တီး၊အချစ်သစ်ဖြစ်စေလျက်၊အသိအကျွမ်း၊မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု၊ခံစားချိန်းတွေ့ဆိုက်။.
မမုန်းပါဘူးအစားအစာ။ ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရီးယားအစားအစာ။ ကိုယ့်ကိုမုန်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့အနည်းငယ်ကွဲပြား။ သင်တန်း၏၊အမျိုးမျိုး၏ရွေးချယ်မှုအစက်အားဖြင့်။ မာက္ကိုးရီးယားအလွန် ၊ဒါကြောင့်အားလုံး၏စားေသာက္ဆိုင္မ်ား တွေ့ဆုံအပြီးဆီသို့ဦးတည်အရသာလိုအပ်ချက်များကို၏ပျမ်းမျှကိုးရီးယား။ ဒါမှမဟုတ်ဒါဟာကင္မ္ခ်ီသောစိတ်ကူးစိတ်သန်း။ သီစိုစွတ်ခြင်းနှင့်ပူပြင်း။ တစ်ခုတူခံစားရ အပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ငါထွက်သွားလတ်ဆတ်သောနှင့်သန့်ရှင်းရေးကနေရေချိုးခန်းပြီးနောက်မိနစ်အမြစ်များစီးဆင်းမှုအောက်မှာငါ့အကြက္။ ဒါဟာစင်ကြယ်သောငရဲပြင်ဘက်အခါ လာ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အ ကြီးကျယ်သောငါးများစတင်သေဆုံးဖို့အတွက်ရေ၏ငါးမွေးမြူရေးခြံအတွက်အရှေ့အရပ်၏။ ငါများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဝှက်အောက်ေလေအးေပးစက္ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေဖို့အပြင်ဘက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့။ အများဆုံးတစ်ခုမှာအနှောက်အယှက်အရာဖြစ် ကွဲ။ ဤသူ ထိုင်နေကြတယ်နှင့်ဟစ်တိုင်းသစ်ပင်မှအစောပိုင်းဇွန်လမှစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်း။ ယှက်ဆူညံျ။ ဆောင်းရာသီချမ်းအေးနှင့်လေထန်။ စတဲ့လေပြင်းထန်ဖြစ်ကြောင်း၊သူတို့ရောက်ရှိနိုင်အထိကီလိုမီတာ။ သူတို့ပဲတွားအောက်၏အဝတ်ကိုကိုခိုးယူခဲ့သည့်သဲလွန်စများ၏နွေးထွေးပြီးခဲသင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို။ ကျွန်တော်စဉ်းစားအလျောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအပြည့်အဝအပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ဗမာ၊ထို့အပြင်၊အဂၤလိပ္စာေလ့လာဒုတိယဘာသာစကားအလျောက်ပေးၽြန္ုပ္၏အသိပညာအနည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်မှကြွလာသောအခါလေ့လာနေတဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကား။ ငါနားလည်ကြောင်းဤသည်ကအကောင်းဆုံးစနစ်အတူတက်ကြပြီအဖြစ်ဒါကြောင့်အခုထိစစ္ျပယ်ပေါင်းများစွာပညာရှင်ပီသစွာလိမ္မာ။ ကျောင်းသားများစတင်လေ့လာနေဗမာစမူလတန်းကျောင်းကနေရာအနှံ့အသက်၊ဒါပေမယ့်အခါ၊သူတို့အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရနှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်၊သူတို့မပွောနိုငျမှာအားလုံး။ တစ်ခုခုရွားကိုအတူအမှားလမ်းကိုသူတို့သွန်သင်သည်။ ငါတွေ့ပြီများအပြားအားနည်းချက်များနှင့်အများအပြား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်နည်းလမ်းများသင်ကြားနည်းစနစ်။ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရွမွာအတော်လေးအနာဂတ်-သက်သေအထောက်အလုပ်မှာအနည်းဆုံးများအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲဆယ်စုနှစ်များစွာ။ ကျနော်ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိရီးယားမှာ၊ငါတုန်လှုပ်ခဲ့။ ငါနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်အသက်ရှင်ခြားတိုင်းပြည်တူနိုင်ဟုထင်ရလူမှအခြားဂြိုဟ်။ တကယ်တော့ကျွန်မတို့အားလုံးအသက်ရှင်အပေါ်သေးငယ်သောမြေကြီးနေဆဲအကြှနျုပျကိုစောင့်ရှောက်အံ့သောကြောင့်ကင္မ္ခ်ီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဂြိုဟ်သားများအတွက်။ ေဖၚျအရာ၊ဟုတ်ပါတယ်၊ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါအတပါးသူတို့အဘို့အအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ငါသည်အခြားအဆင့်အလိုက်အတွက်သူတို့ကိုရှိခြင်းကိုရီးယားခန္ဓာကိုယ်ပေမယ့်မတူညီသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်။ ငါသည်စဉ်းစားအားလုံး၏ကင္မ္ခ်ီတာနဲ့သင့်အတွက်တစ်ဘဝခရီး ဇုန္အကြားတွင်တောင်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားကြောင့်ဤနယ်နိမိတ်အကြည့်နဲ့တူ။ ကိုးရီးယားလူအလမ်းအရမ်းစပ်စု။ သူတို့အဘယ်သူမျှမသဘောမျိုးမေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာမေးခွန်းတွေအတွက်အနောက်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဒေသကမ္ဘာ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ္။ သူအချို့လူရှိပါတယ်ရုံရချင်အောက်တွင်သင့်ရဲ့အသားအရေ၊နှင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်အကျိုးဆက်နှင့်လိုအပ်ချက်များ၏အခြားအရည်အသွေး။ ကင္မ္ခ်ီများမှာ ကိုးရီးယားလူအများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးရဲ့အောင်မြင်မှု၊သူတို့ကအစဉ်မပြတ်ကိုက်ညီဖို့ကြိုးစားသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ သူတို့ကြိုးစားသရုပ်ပြဖို့အချို့ပြင်ပ၏ဂုဏ်အဘယ်အရာကိုသူတို့ယုံကြည်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ဖို့ပုံရိပ်တစ်ခု၏အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်။ သူတို့သုံးစွဲတဲ့အပေါ်ငွေအများကြီးအဝတ်ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းပေမယ့်အစားသေကၤမဟုတ်သူတို့ချစ်သောကြောင့်၊၊ဒါကြောင့်အများကြီးဒါပေမယ့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့ချိုးဖဲ့။ သူတို့ခရက်ဒစ်များအတွက်ဖန်စီနှင့်စျေးကြီးကားများနှင့်ပေါင်များအတွက်တိုက်ခန်းများအတွက်ကွန်ကရစ်သေတ္တာ သူတို့ကိုယ်သူတို့မှကျွန်စနစ်၏နှစ်ပေါင်း။ ရယ်စရာအရာမေးလျှင်သင်မည်သည့်ကိုးရီးယားအဘယ်အရာကိုသူတို့မကြိုက်ကြဘူးကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဤဝေစိတ်ထဲမယ်လို့ပထမဦးဆုံးအရာသူတို့ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဤလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှါနှစ်တိုင်၏ဝေါဟာရများအတွက်နည်းပညာ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများ၏ပမာဏအတူတူနှစ်ပေါင်းဒါပေမယ့်နောက်ပြန်။ ငါအတွေ့အနှောက်အယှက်။ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးသောအခါလူအမညွှန်ကြားဘူးဆိုသူတို့ဘာလိုချင်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခန့်မှန်းရန်၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်။ မတစ်စိတ်။ ငါအတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းက အေးစက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားပုံယဉ်ကျေးမှုဤလမ်းအတွက်ကြောင့်သာကိုးရီးယားလူစတင်သူတို့ရဲ့ဝါကျနှင့်အတူအသေးစိတ်ကိုပြီးနောက်သင်ဆောင်ကြဉ်းရန်အချက်အဆုံးသတ်မှာ။ ဗမာထဲတြင္(နှင့်ရုရှားအတွက်)ကျွန်တော်နှင့်အတူစတင်မှတ်နှင့်တော့ကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့အပေါ်အသေးစိတ်အချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့။ ၏အပြင်ဘက်တွင်ဆိုးလ်မြို့၌မြို့၊သင်ဆဲတတ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုဆင်မပြေဖြစ်စဉ်အခါကင္မ္ခ်ီမြင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ။ သူတိုဖို့ဓါတ်ပုံတွေကိုယူ။ သူတို့ဤမျှလောက်ပေးဆောင်အာရုံစိုက်ဖို့ဒါကြောင့်အချို့လူများစေခြင်းငှါရှာတွေ့စေခြင်းငှါ၊ကောင်းကင်။ ငါမြင်ရပါဘူးလက်ကိုကိုင်ပြီးလမ်းများပေါ်တွင်။ ဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ။ သူတို့မလိင်၊ဒီရုံ၏နိမိတ်လက္ခဏာကို။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ဘုရားသခင်ကယ်တင်ငါ့မျက်စိနှင့်မမြင်ရလည်းမကြာခဏ။ ယောက်ျားတွေလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထွေထွေအတွက်၊သူတို့သည်အသီးအခြားမထိသောအတိုင်းအလိုအနောက်တိုင်းနှင့်ရုရှား(ဖြောင့်)လူအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ခဲ့တဲ့အတွက်အားကစားရုံရှိခဲ့သာနှစ်ဦးယောက်ျားတွေနှင့်အတူငါ့အကျင့်ကိုကျင့်နာကျင်မှု။ တစ်ခုချင်းစီပြီးနောက်၊သူတို့အထိအချင်းချင်းရဲ့အဖျားမှအားလုံးပွဲနှင့်အသံ၊သူတို့အတော်လေးနှစ်သက် နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ အဝတ်အထည်နှင့်ဖိနပ်များမှာ ၊နှင့်အရည်အသွေးအလွန်အမင်းနိမ့်သည်။ အလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုအဆိုပြု။ ဒါဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြိုးစားရှာတွေ့မှအချို့သောအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့နှင့်အကောင်း-ရှာနေအဝတ်များ၏လျောက်ပတ်သောအရည်အသွေး။ ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းတွင်အတွေ့အလမ်းများ၊တီဗီ၊ရေဒီယို၊စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဖေး၊ရုပ်ရှင်ရုံ၊၊အဆိုပါဖုန်းများ၏လူများပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်မှလွတ်မြောက်ရန်ဤ ၊စိတ်ကိုထုံ၊။ ငါအံ့သြပါဘူးဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထောက်ခံ(သို့မဟုတ်ငါဆိုသည်ကားသင့်ပါတယ်။)အစိုးရက။ ထိုသို့ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုလွယ်ကူင်လူစောင့်ရှောက်လျှင်မိမိတို့ဉာရည်မှန်းချက်မှာအဆင့်-။ နောက်ထပ်၊ဒါကြောင့်အကြီးအကျယ်ဘီလီယံဒေါ်လာစက်မှုလုပ်ငန်းယုံကြည်ပါတယ်သောစောင့်ရှောက်စိုးရအလွန်အရေးကြေးရေးကျေနပ်မှု။ မွစ၍ေၾကာက္စရိဆိုင်းဘုတ်ပေါ်အလမ်းနှင့်အတူပြီးဆုံးကြော်ငြာအပေါ်ရုပ်သံနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ၊အရာအားလုံးမှာအော်ဟစ်။ ထမ်းဆောင်တူညီမစ်ရှင်အဖြစ်ကေပေါ့ပ်၊ကိုးရီးယားကြော်ငြာများကိုအလွန်အမင်းထိရောက်သော ပိန်းပျိုးထောင်သစ်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက် မှိုင်း ။ ငါမြင်ကြပြီအများအပြား ပစ်ခတ်နှင့်ညွှန်ကြားရေးကြော်ငြာများအတွက်ငါ့အသက်ကို။ ခြယ်လှယ်၏အများစုကိုးရီးယားကြော်ငြာများလိုပဲဖြစ်ထုတ်လုပ်အားဖြင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏လေ့ကော် ။ ကျေးဇူးပြုပြီးပိတ်ပါ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကအိမ်ရှင်ထက်ပို။ ထိုကဲ့သို့သောယုတ္တိ သတ်မှတ်အတူကွဲပြားမှုများ၏စိတ်ထဲတွင်၊၊အရသာ၊ဝါသနာ၊အတွေးအခေါ်။ တူညီသောအရသာများအတွက်အစားအစာ။ လူတိုင်းကိုချစ်ဆန်။ ငါချစ်ဆန်လွန်း၊ဒါပေမယ့်ငါမစားနိုင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ငါနိုင်စွမ်းအစားထဲကရုရှားသုပ်၊သို့မဟုတ်ဂျူးအသားညှပ်ပေါင်နှင့်အတူ ၊ဒါမှမဟုတ်ဂျော်ဂျီယန်အကင်အစားအစာ၊သို့မဟုတ်တစ်လျောက်ပတ်သောစကား၊သို့မဟုတ်အရာအားလုံးအိမ်ပြန်ပါ။ တူညီတဲ့အရသာအတွက်။ လူတိုင်းနားထောင်ဖို့-နှင့် (ရွန်နစ်ကခုန်ဂီတ)။ လူအများကြီးမသိရပါဘူးအဘယ်သို့သောအကြောင်းအခြားယဉ်ကျေးမှုများပူဇော်ဖို့ရှိသည်။ တူညီတဲ့အရသာအတွက်။ ရှိပါတယ်နီးပါးအဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြင်းအတွက်။ လူအကြည့်အတူတူပါပဲ။ ငါသည်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ဒါပေမဲ့လေးလေးနက်နက်သူတို့ဝတ်များသိမ်းပြီးညနှင့်နေရာတိုင်း။ ငါမြင်အတွက်လူအများသိမ်းပြီးညအတွက်စာကြည့်တိုက်အတွက်မြို့၊ အောက်ထင်မြင်ရာင္ၾသည့်အဆုံးစွန်သောအားလုံးကို-ရာသီဖိနပ်နှင့်အဆင့်အတန်းများ၏အမျိုးသားရေးအမွေအ။ များစွာသောလူငယ္မ်ားခဲ့ဖူးဘူး၏အပြင်ဘက်ရီးယား၊အံ့သြဖွယ်မရှိသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာအကျိုးစီးပွားအတွက်ဘယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခံရတော့နည်းပညာအရအဆင့်မြင့်သူတို့ကိုပေးအခွင့်အလမ်းအကြောင်းဘာမှသင်ယူဖို့ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာ၊သို့သော်အရွှဲနှင့်အတူအိမ်တွင်းအချက်အလက်ဖြတ်တောက်မည်သည့်အလိုဆန္ဒအတွက်။ ပြဿနာများနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်ပူးတွဲဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအောင်သူတို့ကိုတွန့်ဆုတ်သာစားသုံး၏ကိုရီးယားဗီဒီယိုချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းနှင့်အခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာမျိုးကိုသာဗမာကပ်ကိုးရီးယား။ ကိုးရီးယားပြည်နယ်အတွင်းရှိယဉ်ကျေးမှုအထီးကျန်သူတို့ချက်ပြုတ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစားအစာ၊နားထောင်ဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂီတ၊ရီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်သံ၊နှင့်ခြုံငုံကြောင့်ဖြစ်ပါသည်တစ်အထီးကျန်အိုးရပ်တည်မှုဘေးဖယ်ကနေအခြားသူများနှင့် ရံဖန်ရံခါ။ ကသွေးထွက်သံယိုခက်ခဲလေ့လာဖို့။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမိုက်မဲ၊၏ဟုတ်ပါတယ်၊ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဘာသာစကားတွင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးရာအရပျ၊ဒါပေမယ့်နောက်နှစ်အတွက်၊ငါသည်အဆဲမတတ်ဘူး။ အားလုံး င္ငံျခားသဘောတူရာအပေါ်ဘာသာစကားသည်လွန်စွာခဲယဉ်းသည်။အသံအကြောင်းမကြိုက်ဘူးဘာမှမသင်ယူခဲ့ကြပြီ။အဆိုပါယုတ္တိဘာသာစကား၏အထုံးအဆိုပါယုတ္တိဗေဒအကြောင်းဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ ေဖၚျရာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါကျွန်မစကားပြောစတင်တွင်ကိုးရီးယားနှင့်အတူကင္မ္ခ်ီ။ သူတို့စတင်ငါ့ကိုအဖို့ပြောနေတာပါ၏ကဲ့သို့နှောင့်နှေး။ မနှောင့်နှေး။ မမူကြောင်းငါသိ၏။ ကိုယ့်မတတ်ဘူးဒီဘာသာစကား။ ကိုရီးယားအမျိုးသမီးများအလှနှင့်စိတ်ကိုဒါပေမယ့်အရာအခြို့ရှိပါတယ်ကြောင်းကိုငါသည်အလွန်ခဲယဉ်းအချိန်နှင့်အတူပထမဦးဆုံးအခါငါရောက်ရှိလာသည်။ အနောက်ပိုင်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူငါ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအရောင်၊အမျိုးသမီးများ၏တိုက်ရိုက်ချဉ်းကပ်လမ်းများပေါ်တွင်အထင်မလုံလောက်နှင့်အတော်လေးစိတ်ဓာတ်။ အမျိုးသမီးများကိုကြောက်ကြသောအခါသင်တို့ကိုစတင်ဖို့ပြောနေတာအဖြစ်သူတို့ကိုအလွန်မပုံမှန်အခါသူတို့ကိုယောက်ျားတွေအစပျိုးနှင့်အတူစကားဝိုင်းတစ်ခု၏ရည်ရွယ်ချက်အရော။ ကင္မ္ခ်ီပြီ"စည်း"နှင့်"အတွေ့"နှင့်အတူအဟောင်းဖြစ်ခြင်းတစ်ဦးအစုအဝေးအတွက်ကြီးမားတဲ့လူအုပ်စုအဘယ်မှာရှိလူတိုင်းဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါအသီးအသီးအခြား၊နှင့်အဆုံးစွန်သောအခြေခံအ မျက်စိကန်းသောရက်စွဲနှစ်ခုရှိရာအထီးနှင့်အမျိုးသမီးသူငယ်ချင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသူတို့ရဲ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို။ အခါယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုသိရအသီးအသီးအခြားအဘို့အအချို့သောအချိန်နှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်လာသူတို့"ကိုဆွေးနွေးရန်"ဘယ်မှာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုကအခြားအကြံပြုစတင်ချိန်းတွေ့။ အနောက်တိုင်းနှင့်ရုရှားယဉ်ကျေးမှု၊ကျွန်တော်ပြောတခါတရံမှာ၊သို့သော်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း၊အမ်ိဳးအတြက္ဆိုေရွ့လျားေဆက်သဘာဝရှာဖွေမတွေ့ရှိဘဲအလေးအနက်ပြောဆိုအပ်။ အားလုံးမိန်းကလေးများနှင့်အတူစွဲလမ်းနေကြသည်သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်။ သူတို့အားလုံးအယူရာပေါင်းများစွာ၏စြနေရာတိုင်းသွား။ အရာအားလုံးကိုမှကားလေ ဖုန်းမှအမှုခံရဖို့ရှိပါတယ်။ -၊ဒရာမာရုပ်တုတို့အားလုံးအဘယ်အရာကိုသူတို့စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ မ ၊ငါတွေ့သောမိန်းကလေးများအကျင့်ကိုကျင့်သောစိတ်ဝင်စားစရာအမှုအရာတို့သည်မိမိတို့အသက်တာ၌။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာ၊ဒီအရာကိုကျွန်တော်လေ့လာ။ ကိုရီးယားမိန်းကလေးများအဖို့တွန့်ဆုတ်ရက်စွဲယောက်ျားတွေထဲကနေအခြားတိုင်းပြည်။ ပေမယ့်အမှုအရာပြောင်းလဲနေတဲ့၊လူ့အဖွဲ့အစည်းနေဆဲအလွန်အဝေဖန်တတ်သောမိန်းကလေးများချိန်းတွေ့င္ငံျခားသားမ်ား။ ကိုယ့်လိုထောက်ပြဖို့အမှုအရာတို့ကိုတစ်ခုမှာစိတ်ကိုသိမ်းထားသင့်မီဆိုက်ရောက်ဗီဇာကိုရီးယား၊ သူတို့ကဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခံစားမိအိမ်မှာအဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်မှာ။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုမမှားမရကြဘူး။ ငါရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအသံပါ။မဟုတ္ဘူးပးႏုိင္ပါတယ္။. ငါချစ်ရီးယား။ ဤသူကားငါ၏သမိုင်းဆိုင်ရာအမိအပြစ်များ၏နေထိုင်မှုနေရာဝေးအကျိုးအပြစ်။.
အဓိက(သို့သော်အားလုံးမဟုတ်)ပရိသတ်ကလူငယ်များ၏လက်အောက်တွင်သုံးဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်။ ၏သင်တန်း၊အဓိကအအကျိုးစီးပွားဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်လိင်။ ယောက်ျားလေးများအတူမိန်းကလေးများပြောပြရန်၊နှင့်အပြန်အလှန်။ မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်မရှိဘဲကန့်သတ်နှင့်အခမဲ့။ သို့မဟုတ်၊ပေါ်မူတည်နှင့်သင့်အကြိုက်များကိုအသုံးပြုပါ၊ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများ။ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့အဘယ်အရာကိုရှင်းပြဖို့မရည်ရွယ်သည်အားဖြင့်"ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘဲ မှတ်ပုံတင်ရေး"၊"အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်"နှင့်"တာဝန်ခံအခမဲ့"။ လူအတော်များများအသုံးပြုကြသည်ဟူသောအချက်ကိုများစွာသောန်ဆောင်မှုလိုအပ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အပြည့်အဝ-စုံတဲ့အလုပ်။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆက်သွယ်ဖို့အတွက်"မက္ကဗီဒီယိုချက်တင်"။ ရုံကျွန်တော်တို့ကိုလာရှိပါကလှည့်တွင်သင့်မိုက်ခရိုနှင့်ကမ်၊သင်လုပ်နိုင်သည်ပြီးတာနဲ့စတင်က်ပ္။ မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပျော်မွေ့နိုင်အပေါင်းတို့သည်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်။ အပေါင်း"မက္ကဗီဒီယိုချက်တင်"အခမဲ့တိုက်ရိုက်ချက်တင်ကစားတဲ့အနေနဲ့န့်အသတ်အရေအတွက်၏မိန်းကလေးများ။ ဒီကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းအဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ လည်းရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်အပေါ်အသုံးပြုမှုများ၏ကြာချိန်။ စကားပြောပင်သာ ၂၄-နာရီ။ တကယ်တော့၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသာကန့်သတ်၊ဒါပေမဲ့ဒါဟာလုံးဝကိုသဘာဝ။ အတွင်းဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်သည်ပြုမူကျေး၊နှင့်မစော်ကားမှုအ ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်ဥပဒေရေးရာအသက်အရွယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာင့်ဖို့ပိုကောင်းခေါ်ဆိုခကြောင့်"ရှစ်အွန်လိုင်းကစားတဲ့စကားပြောဆိုချက်နှင့်အတူအခမဲ့။"သင်ချင်တယ်၊ပျော်စရာစိတ်ဝင်စားစရာနှင့် ဒါဟာကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြုန်းဖို့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှသွား"မက္ကဗီဒီယိုချက်တင်"ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအတွက်အခမဲ့။ ကျနော်တို့အကြောင်းကိုပိုမိုပြောဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ ထိုနာမည်မှာအဖြစ်အကြံပြုသည်၊ဒီဗီဒီယိုချတ်ပြုလုပ်နိုင်မည့်ချက်တင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းမိတ်ဖက်၊အမြင်နှင့်အကြားအသီးအသီးအခြား။ စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲကန့်သတ်နိုင်ချိတ်ဆက်ဖို့သင်မည်သည့်တိုင်းပြည်အတွက်၊ကမ္ဘာနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအများမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ဆန်ကမ္ဘာ၏သေးနေဆဲစိုး။ ဂိမ်းအဘို့ပေါ့ပေါ့ချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းတပ်ဆင်ခလိုအပ်မှသာအပေါ်တစ်ဦးမိုဘိုင်းဖုန်း(အခမဲ့)၊မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။
ဗီဒီယိုချက်တင် ။ သေချာအောင်
အချိန်အခါကအင်တာနက်ကြိုးစားနေသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့၊လူမ သူတို့မပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တစ်စိတ်ကူးယဉ်သက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကူအညီဖြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး၊သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အစားအစာ၊အဝတ်အထည်များ၊ကားများ၊အိမ်ခြံမြေ၊အပင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဝယ်ထားသူ၏အသက်ဝိညာဉ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုတွေ့ရပါကြောင်း။ အခုနောက်ပိုင်း၊များစွာသောလူမတော်တဆတွေ့အသီးအသီးအခြားနေ့စဉ်အသက်တာအတွက်၊ဥပမာအားဖြင့်၊မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်"ဆက်သွယ်ရေးကစားတဲ့"-ဤစိတ်ဝင်စားစရာလမ်းမှအထွက်အမျိုးအစားပြဿနာများနှင့်ခံစားချက်များကို၊ဥပမာအားဖြင့်၊အတွက်။ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အတွက်အလှူ:"အောက်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်ကီးဘုတ်၊ဗီဒီယိုစကားပြော၊ဤအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်။ ဒါဟာအလွန်အရေးပါကြောင်းမှတ်မိဖို့အပင်ဤအချိန်တွင်၊ဖြစ်တဲ့နေရာအမှား၏၊အခြားလူများယူဓာတ်ပုံများ၏အလေကြောင်းရန်သို့မဟုတ်အဓိကဓာတ်ပုံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်။ အတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်၊ကျေးဇူးတင်စကားကိုအသုံးပြုသူဖော်ရွေမွတ္ထားပုံစံ၊အသက်အရွယ်ကန့်သတ်အဖြစ် ၁၈ အနှစ်။ အဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်ကြီးမားသောအရေအတွက်သင်တန်းသားများကိုချက်တင်ဖြစ်စေ၊ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်။။။။။ သို့သော်၊အများဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့သင်လိုအပ်ပါဘူးနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်၊ အဆုံးသတ်ထိထည့်သွင်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို။ ဒါဟာနှင့်အတူတစ်ဦးထိခိုက်နေသော။ အချက်တင်အခန်းကိုဝန်ထမ်းများအလွန်ဖော်ရွေပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေ၊မ်က္ႏွာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်၊ဆက်သွယ်ရေး၊ပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏အရေးအပါဆုံးအားသာချက်။ မတူဘဲရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်အတူသာဗီဒီယိုချက်တင်၊လူအတော်များများဟာအပြောချင်တဲ့အရကျွမ်းနိုင်၊ဆက်သွယ်နိုင်၊လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာ၊အတတ်ပညာ၊နိုင်ငံရေး၊သဘာဝ၏အတွေ့အကြုံဖလှယ်စကားကအားသာချက်တစ်ခုအတွက်။ သင်တန်း၏၊ကျနော်တို့မဖယ်ထုတ်ဆက်ဆံရေးကိုနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဆက်သွယ်ရေး၊ဒါပေမယ့်တယောက်ရာခိုင်နှုန်း၏အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများများဖန်တီးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အားကြီးသောမိသားစုအသင္းအွန်လိုင်း။
ယောက်ျားတွေများအတွက်အဘယ်သူသည်မကြာခဏအမေရိကန်အခြေစိုက်ဖစ္သျဆိုဒ်များ၊ဂန္ထ အလွန်ကြီးစွာသောပြောင်းလဲမှုများ၏အရှိန်အဟုန်။ အစားရှိခြင်းထက်အရာအားလုံးကိုထည့်သွင်း၏ကုန်ကျစရိတ်အောက်တိုကင်၊အမှတ်စနစ်အပေါ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နိုင်တယ်သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းအတွက်အတိအကျနည်းလမ်းတွေချင်တယ်။ အဆိုပါမော်ဒယ်များအပေါ်ဂန္ထ အချို့လုပ်ဆောင်ပြုမူသောအခါပေးဆောင်ရ-ဒီအအရောင်းအဝယ်နှင့်အပေါ်အခြေခံပြီးအစွန်အဖျားဘယ်မော်ဒယ်မချည်နှောင်ဖို့ဘာမှလုပ်ပြီးနောက်သင်ဘာသာျပန္ခ်က္သူတို့ကိုစလှေတျတျော။ နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ချက်တင်၊၎င်း၏့ရလွယ်ကူသိမော်ဒယ်ဖြုန်း်ရှေ့တော်၌သင်၏ရမှတ်။ သင်သည်လည်းထည့်သွင်းအပေါ်အင်္ဂါရပ်အဖုအဖုအလှန်အဖြစ်ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများ။ တက်လက်မှတ်ထိုးအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊တစ်အခမဲ့ အမှတ်အပိုဆုတက်လက်မှတ်ထိုးသည့်အခါပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့။ ဂန္ထ သည်ပြီးပြည့်စုံသောအဘို့အယောက်ျားတွေကြိုက်တတ်တဲ့သူအာရှမင်းသမီး။ ဂ်ပန္ကားေတြအများစုမှာဂန္ထ ၊ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်ကနိုင်ငံတကာမော်ဒယ်များအထူးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ၎င်း့ပိုမိုလွယ်ကူသင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ထိန်းချုပ်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါကအခြားဆိုဒ်များ၊နှင့်အႏွမိနစ်နှုန်းလျော့နည်းစျေးကြီးသည်။ ဂန္ထ အခမဲ့ခါင္ကအလုပ်လုပ်အပေါ်ရမှတ်များအတွက်ပေးဆောင်။ အသီးအသီးအချက်ကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာဒေါ်လာ၊အသစ်နှင့်အတူသွင်းြရတဲ့ရမှတ်များအတွက်အခမဲ့။ အမှတ်သည်သက်တမ်းနှစ်နှစ်အောက်ဝယ်ယူ။ အရေအတွက်ရှိပါတယ်သောအင်္ဂါအဖွဲ့ဝင်များဖြုန်းနိုင်မိမိတို့အမှတ်အပေါ်:သောကြောင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းသည်အခြေခံဂျပန်အတွက်ရှိပါတယ်၊အများကြီးရင်းသားကွဲပြားမှုအတွက်အဆိုတော်။ အများစု၏အမော်ဒယ်များတွင်တင်ဆက်ရာတွင် မှာ။ ဆိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အတွက်ဂျပန်၊နှင့်နေစဉ်သင်ရနိုင်၏အကျဉ်းချုပ်သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုအွန်လိုင်းအဘိပစၥည္းမ်ား၊အစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်ဆိုက်၏အကြောင်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မည်ဖတ်နိုင်ဂ်ပန္စာကိုနားလည်ဖို့။ တစ်ဦးအဘို့စစ်မှန်သောအာရှအဖုသဘင် အတွေ့အကြုံ၊ဂန္ထ သည်ထိုအရပ်မှသွားပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသောပလက်ဖောင်းသင်ကူညီပေးသည်သင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ထိန်းချုပ်မပါဘဲမည်သည့်နည်းအွန်လိုင်းကမ်တွေ့အကြုံ။ ဂန္ထ သည်ရွေးချယ်ကြောင်းကားေသာအမုန့်သီးနှံများ၏အပေါ်ဒီအာရှကမ်။
ထိုကဲ့သို့သောလင့်များတွင်ပါရှိသောကြော်ငြာ"။ ကြော်ငြာ"။ နှစ်ဦးစလုံးအဆိုပါကြော်ငြာအကြောင်းအရာနှင့်အရှိရာဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်များကိုလက်ခံစေခြင်းငှါလျော်ကြေးအခါစာဖတ်သူတွေကိုနှိပ်ပါပေါ်ဤလင့်ခ်။ တချို့သောအကြောင်းအရာသင်ပြန်မှဖြစ်မည်ဆာ္သည္။ ကျေးဇူးပြု၍ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ။ ဘယ်လိုထွက်ရှာဖို့သင်နိုင်ပါတယ် အသုံးပြုမှုအကြောင်းအရာ။ ကြော်ငြာများကိုညွှန်ကြားဧည့်သည်များသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းရန်ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့်သင့်ဆိုဒ်၊ကျေးဇူးပြုကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကနေတဆင့်အကြောင်းအရာအချက်အလက်။ ကြော်ငြာ။ ဆိုက်ပိုင်ရှင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ကြောင်းအရာပေါ်တွင်ပြသထားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်။ သို့သော်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သေချာအောင်ကြော်ငြာတွေကိုအမြဲပြသမိသားစုများအကြောင်းအရာအပေါ်ဒီကိရိယာသက်ဆိုင်သောဆိုဒ်ကိုစစ်ဆေးရွေးချယ်စရာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ပိုမိုသိရှိအလွန်ကြီးစွာသောမိသားစုကိုတန်ဖိုး၊နှင့်ကလေးများမှပူးတွဲပါနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်ပြောင်းလဲဖို့သူတို့ရဲ့အနေအထားတွေအများကြီးနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့မထောင်။ သို့သော်၊သူတို့ကအရမ်းဖော်ရွေအားဖြင့်သဘာဝနှင့်ခံစားအလွန်ကောင်းတဲ့ရှိခြင်း ဖုအသက်ရှင်သောချက်တင်သို့မဟုတ်ကမ်ချတ်သည်လုံးဝအခမဲ့နှင့်လိုအပ်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်။ လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြားကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံး အခြားရွေးချယ်စရာ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊အခြားရွေးချယ်စရာ ၊တူဆိုဒ်များ အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်မက္ကဆီကို။ အခုပဲထင်ပါတယ်။ အခါသင်၏တဦးတည်း အများစုဟာအစွမ်းထက်ပေမယ့်ဖို့လွယ်ကူသောနည်းလမ်းစကားပြောမက္ကစီကိုအတွက်၊သင်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နှင့်အတူမက္ကဆီကန်မိန်းကလေးသို့မဟုတ်ကောင်လေးတစ်ယောက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အခေတ်မီဆန်းဝန်ထမ်းများခန်းအခန်းများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမက္ကတစ်ဦးတစ်ယောက်အဖမ်းမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအားဖြင့်အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင်သို့မဟုတ်ဖုနှင့်အတူစကားပြောမက္ကဆီကို။
ရီးယားနိုင်ငံ၏အလှရပ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရ။ ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နိုင်လျှင်ရရှိရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူစကားပြောတစ်ဦးအစိမ်းရသိရဖို့အရာများစွာအကြောင်းအသီးအသီးအခြား။ ဘာမှမခဲရှိပါသည်ပိုပြီးပျော်စရာနှင့်မည်ဟုဤထက်နှင့်ကိုရီးယားချိန်းတွေ့ရီးယားပေးနိုင်အတွေ့အကြုံသင်သည်သင်၏အသက်တာ။ သငျသညျစကားပွောနိုငျမည်သည့်ကျပန်းစိမ်းနှင့်ရတစ်ချိန်ကနှင့်သင်အဆင်ပြေနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား၊သင်ပင်စတင်အဆိုပါဗီဒီယိုချက်တင်။ ဒီ တစ်မူထူးခြားတဲ့နှင့်အထူးချက်တင်အခန်းဝန်ဆောင်မှုသောရွေးချယ်စရာစူးစမ်းဖို့လူများထံမှကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်း၏ပြီးစကားပြောနှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့အလုံခြုံဆုံးချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်တိုင်းပြည်ရှိလူများစွာချိတ်ဆက်ဖို့ကိုရီးယားချိန်းတွေ့ရီးယား။ ဒါကြောင့်၊သင်လူအတော်များများစကားပြောပြီးတော့စတင်အတူဗီဒီယိုနှင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သိလူသစ်နှင့်ဆွေးနွေးရန်။ သင်အသစ်များသိမှရသောအမှုအရာအကြောင်းသက်ပြောင်းလဲနေတဲ့။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်စကားပြောပန္းအစိမ်း၊သစိတ်လှုပ်ရှားမှုအကျင့်ကိုကျင့်၏ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခု။ သင်ရောပြီးပြော၏။ သို့သော်၊ထိုသို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်များစွာသောလူအမှန်တကယ်အတူတူလာပြီးနောက်သူတို့တွေ့ဆုံတကျွန်းတနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ရီးယားရှိဇာ္ကလုံခြုံရေးနှင့်မရင်ခွင်အတွက်။ အဆိုပါသီးသန့်နေရာတစ်ခုရှိရာအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအထူးအဆင့်ဆင့်ကိုသေချာစေရန်အချက်အလက်များနှင့်အချက်အလက်နေဆဲဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်မအလွဲသုံးစားအားဖြင့်အခြားသူများ။ ဒါဟာတစ်ဦးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အချစ် ပြောဆိုရန်ကွဲပြားခြားနားသောလူတို့နှင့်အတူလုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်စောင့်နေကြသည်ဖြစ်ထိပ်တန်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ဒီလုံးဝကိုအသုံးပွုဖို့အခမဲ့နှင့်လည်းမလိုအပ်ပါဘူးမည်သည့်မှတ်ပုံတင်အဖြစ်ကောင်းစွာအသုံးပြုရန်ဝန်ဆောင်မှု၏ကိုရီးယားချိန်းတွေ့ရီးယား။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်၊အဘယ်မှာသင်ဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်၊အဘယ်မှာသင်ဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့။ ကျွန်တော်ကအပျော်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့အိပ်မက်ကတစ္ခုေရြး၊အသွားအမြောက်အမေရိကနှင့်အခြားအစာရှောင်-ကျူးကျော်အရွယ်တုန်းက၊ဥရောပနှင့်ငါ့ချစ်သောသူ။ နှိုးထလာနှင့်ခံစားအတူတူဖြစ်လိမ့်မည်ကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။ ဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ဒါပေမယ့်အလွန်ပျော်စရာ၊ဥာဏ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအသက်ရှင်ရန်၊ဆက်သွယ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်။ ချင်ပါတယ်တကယ်လို။ ငါ၏သားကျောင်းသားတစ်ဦး၊အိမ်လုပ်ရုရှ ။ ဒီတော့ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့တောင်းဖို့သင်ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားပါက္တစ္ခုျ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့သူအတွက်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပွင့်လင်းအာကာသ။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ဒါပေမယ့်၏ဖို့ပိုရှိပါတယ်ထက်။ ငါသေချာပါတယ်သင်သဘောတူပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းသောအရှင်၊ဆိတ်ငြိမ်တယ်၊၊မေတ္တာ၊နွေးထွေးအရာ၊အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့၏၊စာနာ၊ဟာသ၊အထီးကျန်၊ဒါပေမယ့်တွန်းထုတ်အားဖြင့်ကြီးမားတဲ့နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကို။ ဘုရားသခင်သည်အဖိုးတန်။ထို့ကြောင့်၊ကနေရှားပါးမှု၊ဝမ်းနည်းမှု၊စိတ်မရှည်သောမေထုန်ကို၊စ္နဲ ၊ ဆင့်ဆင့်၊ထို့နောက်အမည်ညွှန်း-သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပူးပေါင်းဖို့အတွက်ငါ့ကိုငါ"အညစ်အတွင်း"များပြင်ဆင်ထီးထီးဒီ၊ငါတို့သည်သင်တို့အသင်လိုအပ်သမျှကိုရရှိရန်အသက်ဝိညာဉ်၊နှလုံးစိတ်။ ဆင်းရဲသားများ၊ခရစ်ယာန်များ၊မြေ၊အဘယ်သူမျှအမိုးမရှိ၊အဝတ်အလယ်ရှိ၏-မျိုးသမီးများအတွက်ဇိမ်ခံကားသားရေခါးပတ်၊ယခုရေးသားဖို့အခမဲ့ခံစားရသို့မဟုတ်စ္ရိွ၊အသုံးဖိုမရှိဘဲ၊အထီးကျန်၊ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်မရှည်၏။ ဤသည်ကြီးစွာသောအချိန်-သင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူလွန်း၊။ ငါ့အသက်ကိုအတွက်၊အားလုံးစစ်မှုထမ်းအချက်ပုံနှိပ်စာနှင့်တောင်းဆိုမှုများ။ တန်း ။ လျောက်ပတ်သောအလုပ်၊ထောက်လှမ်းရေး၊စသည်တို့ကို။ ကျွန်တော်ထင်တာကအမျိုးသမီးအတွက်ဇက်နားမလည်ကြဘူးနဲ့လက်မခံကြဘူး။ ငါ့အကြိုက်ဆုံး ဒေတာဘေ့စဖို့၊ငါသရေစာအစဉ်အဆက်ကတည်းက။ မည်သူမဆိုထက်ပိုလောကအတွက်အကြိုက်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထား၏ကြီးမားသောအရေဂ။ ဘူး၊ငါ့ကိုထားခဲ့ေမကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ခက်ခဲအချိန်မပြောင်းပါခင္ဗ်ာ ဘူးနှံငါ့အသက်ကို။ သင်ဂရုမစိုက်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့်ငါပြုမည်၊ဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုအကြှနျုပျကို။ အကြှနျုပျကိုပြောပြပါလုပ်နည်းနုံနှင့်အခိုငျအမာဖြစ်ကြောင်း၊လူကောင်းအမျိုးသမီးသင်တန်း၏၊နှင့်ဒုတိယအ၊။ ငါရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူသူတစ်ကောင်လေးနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အတွက်အွန်လိုင်းအပစ်ကပ်ထရပ်ကား။ အမျိုးသားများအတွက်တစ်ခုနှင့်အတူမြင်နိုင်အက်ဥ္း၊မွတ္ပံုဒီမှာဖြစ်ပါသည်အခမဲ့။ ပြီးနောက်၊သင်မှတ်ပုံတင်မည်ဖြစ်ဖို့လက်လှမ်းနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအမျိုးသားနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်သာဇတ္စ၊ဒါပေမယ့်လည်းအခြားနိုင်ငံများအတွက်ကမ္ဘာ၏။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အောင်မေတ္တာ၊အသစ်သောအသိအကျွမ်းများ၊မိတ်ဆွေများနှင့်ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်၊ယခုကိုခံစားချိန်းတွေ့ဆိုက်။.
တောင်ကိုရီးယားသည်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရှိကြောင်းလူအများကြီးဖို့ရှာဖွေနေကျပန်းစကားပြောနှစ်ဦးစလုံးတဆင့်ဗီဒီယိုနှင့်စာသားစကားပြောခန်း။ ဒီတော့ရှာနေလျှင်၊သင်ကသင်နှင့်အတူဆိုဒ်များကိုရီးယားချိန်းတွေ့အတွက်တောင်ကိုရီးယား၊သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာမယ့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ကူညီလိမ့်မည်ရှာဖွေပြီးပြည့်စုံသောနေရာမှဧည့်စကားပြော၊လူသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊နှင့်သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထိသင်ပင်စကားပြောဆိုတော့ဘူး။ သင့်ရဲ့ရတဲ့ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့စတိုင်က်ပ္စည်းအဝေးသာဖြစ်ခဲ့ဖူးဒီအကြောက်မက်ဘွယ်သော၊နှင့်ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူပြုစုပါပြီဒီအံ့သြဖွယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်သင်ကူညီသင့်ရဲ့အပေါ်အွန်လိုင်းချက်တင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာခရီး။ ကျနော်တို့အယူအဆင်းရဲ၏ထွက်ရှာပေးပါသင်လိုအပ်သမျှသင်တဦးတည်းအတွက်အစက်အပြောက်။
ေျပူးပေါင်းအသိုင်းအဝိုင်း။ အများကြီးရှိပါတယ်ကောင်း-ရှာဖွေနေ-အကောင်းယားပါဘူး။ သင်ဆိုရင်မ၊သင်အမြဲသွားဖို့ယားချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့လီေထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မင်္ဂလာပါ။ ငါကြိုးစားခဲ့ကြကိုးရီးယားချိန်းတွေ့၊ချသာ"ကိုးရီးယား"ပါ။ ရှိလိမ့်မည်အများကြီးမှန်ကန်ကင္မ္ခ်ီကျော်နှင့်အတူစကားပွောဖို့ရှိပါတယ်။ သင်ကြိုးစားနိုင်ပါဗီဒီယိုဗားရှင်းအဖြစ်လိမ့်မယ်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်တတိုက်ရိုက်မျက်နှာချင်း။ ကျွန်မတွေ့ဆုံခဲ့ကြီးများ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုရီးယားအပေါ်တွင်ယောက်ျားတွေကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ဗီဒီယိုစကားပြော၊သူတို့မှာငေးအတွက်ငါ့ကိုအမျက်စိ။ ငါနည်းနည်းပူပန်ခြင်းအားဖြင့်အဆိုပါမေးခွန်း။ ဒါဟာပုံမှန်နှင့်မျှော်လင့်လူတို့အဘို့ရှိသည်ဖို့ဦးစားပေးအမြင့်၊အလေးချိန်၊ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများ၊စသည်တို့ကို။ ဒါပေမဲ့တီထင်ယားတစ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ထူးခြားသည်ဆို၏ဤဒေသများ။ လူတွေကမကြာခဏအန္တရာယ်ဖန်တီးခြင်းအဖြတ်များအတွက်သူတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူး၊အရာကိုဆိုလိုသည်သင်အတီလူတဦးကိုမြင်လျှင်၏ရှေ့မှောက်၌သင်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ သူကပြောပါတယ်၊သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအစည်းအဝေး၏ပွဲစဉ်နှင့်သင်ထင်ကြောင်းတစ်ခု၏လိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ်ကိုးရီးယား၊ငါ၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအရွှေ့ကိုရီးယား။ ဒါဟာ အပြည့်အဝကိုးရီးယားလူ၏ထက်ဝက်ခန့်နေသောအမျိုးသားနှင့်ငါသေချာဖြစ်ကြောင်းကိုအရေအတွက်ကိုတိုင်းတာသည်ချောမော။ သွားလျှင်ကိုရီးယားမှာရွေးစရာတခုမဟုတ်ပါဘူး၊အဘို့အကိုရီးယားအသင်းတော်သင်သည်သင်၏ဧရိယာ၌။ ဘူးမ်ားအတွက် ။ ။ ပေးသောအလေ့အဆုိးမှာကိုးရီးယားအသင်း။ မှတ်ချက်ကြောင်းလျှင်သင်အမကိုးရီးယားအသင်ဖြစ်နိုင်မယ့်လိုမျိုးရပ်တည် တွင်ဆား၊ငရုတ်ကောင်း ။
အဖြစ်အ ၊မက္ကမိန်းကလေးများကြာခဏလျစ်လျူရှုနေကြပါတယ်။ မေးမြန်းသည့်ယောက်ျားရှိရာအရှိဆုံးလက်တင်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများထံမှလာ၊နှင့်သူမည်မှာသေချာပါသည်"ဟုပြောလံ"သို့မဟုတ်"ဘရာဇီး"။"အစဉ်ရှိမရှိအငြင်းအမျိုးသမီးအတွက်အဲဒီနိုင်ငံတွေဟာအံ့သြဖွယ်၊မက္ကမိန်းကလေးများချက်စောင့်ရှောက်ဖို့။"ဒီနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသာနာရီအနည်းငယ်မှအများစုမှာအဓိကအမေရိကန်မြို့၊မက္ကစီကိုအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခု(နှင့်)နိုင်ငံများအတွက်အမျိုးသားများအတွက်စိတ်ဝင်စားလက်တင်ဘာသာစကား။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ၊ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပါသည်ကိုအသေးစိတ် လမ်းညွှန်ဖို့တက်ရိုက်နှက်မက္ကမိန်းကလေးများ။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အကြံပြုချက်သင်ကူညီသင့်တယ်သွားပြီးယဉ်ကျေးမှုအတားအဆီးနှင့်အဖတ်အတူနယူးမက္ကမိန်းကလေးများအချိန်အတွက်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အစာစားအရည်အသွေးမြင့်မားမက္ကမိန်းကလေးများ၊သင်သိရန်လိုအပ်သည်အနည်းငယ်ပိန်။ အရန်ထားသောစာပိုဒ်တိုများဒီအရည်အသွေးမြင့်မား၊သင်ဆဲနိုင်မည်အသွယ်ကို"မုဆိုး"။"သို့သော်၊လျှင်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အပူဆုံးမက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးနှင့်အထဲကနေထွက်ရပ်ခြားခရီးသွား၊သင်ရသင့်သောအခြေခံအချက်များ။"ကံကောင်းထောက်မစွာအတွက်၊သင်စပိန်အလွယ်ကူဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဘာသာစကားသင်ယူရန်အတွက်ဗမာ။ ဒါကြောင့်ပညာရှိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစုံတွဲတစ်တွဲလအတွင်း၏အလေ့အကျင့်အားဖြင့်အစီအစဉ်အတူစပိန်ဒုံးပျံမီဘွတ်ဒီလေယာဉ်။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊အမှုအပေါ်ပြန်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတန်ဖိုးရှိဖြစ်လိမ့်မည်။ နိုင်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်အဖြစ်အများအပြားရက်စွဲများအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တိုးမြှင့်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်ဆက်သွယ်မက္ကမိန်းကလေးငယ်၊ဒါကြောင့်လုံးဝလိုအပ်သုံးစွဲဖို့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ငါ အနက်။ လျှင်သင်ပြီးသားအချို့ကိုပုံစံကိုအသုံးပြုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သော၊ဒီအအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုနိုင်အောင်တိုးချဲ့ဖို့သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူ။ နှစ်ဦးစလုံးဆိုဒ်များကိုပူဇော်တွေအများကြီးရှာဖွေနေ-အကောင်း ။ မသွားခင်တာင္အနေဖြင့်နယ်စပ်တက်လက်မှတ်ထိုးရသည့်အကောင့်အဘို့ထိုသူတို့အသီးအသီးသေချာအောင်၊သောဓါတ်ပုံများမှာအချက်စတင်ခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ဖို့တို့။ သင်ပါဝင်ရန်အတွက်အရာျဖစ္သည္။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုသေချာအောင်သင်အစားအများအပြားအဖြစ်မက္ကဆီကန်မိန်းကလေးဖြစ်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်သတိရဖို့အထားရက်စွဲများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အတူမိန်းကလေးများခင်ရောက်လာတိုင်းပြည်အတွက်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်သည်ဆိုပါကသင်အစီအစဉ်အဖြစ်မက္ကစီကိုအတွက်အချိန်အတိုတောင်းတဲ့ကာလ။ အကြောင်းပြောနေတာမိန်းကလေးများမီရောက်လာသော၊စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ရွေးချယ်စရာပြီးသားရရှိနိုင်သင်ဆင်းသက်သောအခါ၊သင်ကူညီလိမ့်မည်တိုက်ဖျက်မှုပေးသင်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်အရာ၏စိတ်ကူးသင်တို့အဘို့အရှာနေ မိန်းကလေးများထက်ဖြစ်သင့်ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူတစ်ဦးအတု။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊မက္ကကင္ယာခွင့်ပြုမိန်းကလေးများပြောပြရန်အတွက်မက္ကဆီကို၊မခွဲခြားဘဲသူတို့ရဲ့တည်နေရာများ။ လျှင်ကောင်းစွာကစား၊ထိုမိန်းမဆောင်အိတ်နှင့်တူသောအဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေစေခြင်းငှါအခါသင်ရောက်လာ။ လို့အမေရိကန်မိန်းကလေးများရှိပါတယ်၊အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမက္ကမိန်းကလေးများ။ ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်အဘယျသို့ထွက်ရှာဖို့သင်ကြိုက်အဘယ်အရာကိုသင်လို။ ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ၊ကယ်တင်မည်သင်ဒုက္ခအများကြီး။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်ကြိုက်လျှင်အယူအ အတူအတြင္းခံေဘာင္းမိန်းကလေးများနှင့်အဘယျသို့ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ယူလွယ်ထက်၊ပွောဆို၊တစ်ပန့်ခ်တင္ဆက္ေမိန်းကလေး၊သင်မှာအာရုံစူးစိုက်ချင်တဲ့အပေါ်မှာသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအတြင္းခံေဘာင္းအရက်ဆိုင်နှင့်ကလပ်အသင်းထက်မြေအောက်ပန့်ခ်။ ရလာတဲ့အခါအသစ်တစ်ခုကိုမွို့မှမက္ကစီကိုအတွက်၊မမေ့လျော့သည်အဘယ်မှာရှိထွက်ရှာရန်ဒေသခံများမှာအဘယ်မှာသင်အများဆုံးဖွယ်ရှိသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်အတူမက္ကဆီကန်အမျိုးသမီး။သို့သော်၊အတွက်ဆွဲထောင့်။ကိုယ့်ကြောင့်သင်နိုင်ဘူးကောက်ဖက်ရှင်မိန်းကလေးများသင်အတိတ်အတွက်၊သင်မနေကြိုးစားနေစောင့်ရှောက်လျှင် သငျသညျအဘယျသို့ချင်တယ်။ စစ်မှန်တဲ့ဒါဟာင်၊ကစားသမားတွေရနိုင်မိန်းကလေးများမှအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစား။ ဒါကြောင့်သင်အိပ်နှင့်အတူမက္ကဆီကန်မိန်းကလေးမက္ကစီကိုအတွက်၊သင်ပိုကောင်းရှိသည်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာ။ ဤသည်အများအပြားအကြောင်းရင်းများ။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊အဆိုပါအချက်ကိုသင်အငှားနိုင်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းတစ်နိမိတ်လက္ခဏာများ၏မြင့်မားသောလူမှုအရေးပါ။ ဒုတိယအမဟုတ်၊အများအပြားမိန်းကလေးငယ်ခံစားရသက်သာခြင်းသို့ရောနှောကြည်းခုနစ်ခုနှင့်အတူအခြားလူများ၊သူများလုပ်ချင်ကြပါဘူးဖို့ရှိသည်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမ။ လျှင်သင်အလေးအနက်အစည်းအဝေးမက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများ၊စုဆောင်းအနည်းငယ်အပိုဒေါ်လာနှင့်ငှားဟိုတယ်သို့မဟုတ် ။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုအတွက်မက္ကဆီမိန်းကလေးများမ။ ရုံစတိုင်ဘားအတော်လေးနိမ့်ကျသည်၊နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ပုံမှန်မက္ကဆီပါသောကျောပိုးအိတ်ဝတ်ဆင်လိမ့်မည်အတွက်ကုန်တင်ဘောင်းဘီနှင့်အနာရောဂါစွဲဂရပ်ဖစ်တီရွပ္။ ရိုးရှင်းသောလုပ်ရပ်၏အဝတ်ပေါ့ပေါ့အင်္ကျီနှင့်ကောင်းတစ်ခုတစ်စုံကိုဖိနပ်လိမ့်မည်သင်သည်များ၏ရှေ့မှောက်၌အထီးလူဦးေ။ အခါအများစု အခါပြည်ပခရီးသွားလာ၊သူတို့လုပ်လေ့၎င်းတို့၏အဆိုးဆုံးအဝတ္အထည္မ်ား-အမှုအရာအကြောင်းမဆုံးရှုံးတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်လျှင်အမေ့အတွက်သူတို့ကိုဟိုတယ်အခန်း။ မတဦးဖြစ်သူတို့အားယောက်ျားတွေ။ ကိုယ့်ကြောင့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အတွက်မပါဘူးတရားမျှတနဲ့တူရှာဖွေနေ။ လျှင်မက္ကဆီကန်မိန်းကလေးဖို့ရှိအိပ်နှင့်အတူသူမ၊သူမရိုသေလေးစားရန်သင်လူအဖြစ်။ ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်လေးစားလူအဖြစ်၊သူမဖြစ်ရမည်စိုး။ အခြေခံအားဖြင့်၊ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းစေ။ ကြည့်သူမ၏မျက်စိ၌အခါသင်သူမ၏အားဟောပြော၊အရပ်တက်နှင့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ရသည့်အခါသင်မေး။ ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့၊သင်သည်အဘယ်သို့ပြုတာပေါ့။"အစဉ်အမြဲသောလုံ့။ စိတျထဲမှာစောင့်ရှောက်ခံရကြောင်းစိုးထံမှကွဲပြားခြားနားသည်ခံရရန်လိုသည်။ ယောက်ျားလေးများအတွက်မက္ကစီကိုအတော်လေးပြင်းထန်တဲ့အတွက်အရက်ဆိုင်နှင့်ကလပ်အသင်း၊ဒါကြောင့်သူတို့ကအတုတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်သင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ဒီနေရာမှာ။ အဲဒီအစား၊သုံးစွဲရန်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်လိုက်ရှာသောအခါမက္ကဆီကန်အမျိုးသမီး။ ဒါပေမယ့်အချိန်င်သောအခါသူမ၏ထွက်မေးရန်၊ပြသနေတဲ့အတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံ။ တစ်ခုခုပြောစေခြင်းငှါ၊ သင်သည်မသိဘူး:အချို့မက္ကဆီကိုမြို့ဘယ်မှာဒါဟာလွယ်ကူမယုံနိုင်လောက်အောင်ချထားရ။ အခြားမြို့။ တကယ်မဟုတ်ဘူး။ လျှင်သင်ရိုက်နှက်ရန်မျှော်လင့်ျဖင့္မက္ကမိန်းကလေးများအနည်းငယ်အတွက်ရိုးရာကျေးရွာ၌ပြည်နယ်အစာငတ်၊သငျသညျအခြားအရာတစ်ခုခုကြောင်း၊အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲခိုင်မာတဲ့သင့်ရဲ့ဂိမ်းအမည်မပြောင်းဓေလ့အရ။ အလားတူပင်၊မြို့မက္ကစီကိုအတွက်ရန်လွယ်ကူသည်အဘယ်မှာရှိရှိရာအိပ်နှင့်အတူဒေသခံအမျိုးသမီး၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်လိမ့်မည်ရပ်တန့်ဖို့ရှာတွေ့သောသူတို့ကျမတို့တကယ်ကြိုက်။ ယေဘုယျအနေဖြင့်၊ဒီပိုကောင်းလိမ့်မည်အများအတွက်မြို့ကြီး။ သင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်မက္ကစီကိုစီးတီး၊ နှင့်ဒ့ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှု။ အတော်များများလည်းရှိပါတယ်ကျောက်မျက်၏ဝှကျထားသောတိုင်းပြည်အနှံ့အဘယ်မှာသူတို့ရဲ့ထူးခြားသောအချက်တစ်ချက်သည်အိမ်ခေါင်မိုးမှတဆင့်။ မြားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ကိုယ်အဘို့ထဲကရှာတွေ့။ မက္ကမိန်းကလေးများအများကစိတ်ဝင်စားင္ငံျခားသားမ်ား၊သူတို့ဖြစ်လို။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှက်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်ဥရောပနိုင်ငံများအနောက်တိုင်း၊မိန်းကလေးများအတွက်မက္ကမရှိသလောက်-လျှင်မှာအားလုံး-ပစ်လျှင်၊သင်တို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုသူတို့ကိုလမ်းပေါ်မှာ၊ဘတ်စ်ကား၊အတွက်၊သို့မဟုတ်ပင်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ နှင့် အကယ္မိန်းကလေးစိတ်ဝင်စားမဟုတ်၊သူမအရမ်းညံ့သတိေပးခ်က္။ ဤလမ်းထိုသို့စဉ်းစားပါ။ အဆိုးဆုံးမှာ၊သူမသည်မပေးမည်မဟုတ်သင်သူမ၏ဖုန္းနံပါတ္။ မှာအကောင်းဆုံး၊အဝတ်အချည်းသာတစ်ခန်းပြီးနောက်ထိုညဉ့်။ တစ်မျှမျှတတရိုးရှင်းပြီးကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးကျေးဇူးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နောက်ဆုံးသော်လည်းမအနည်းဆုံး၊သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများဖွင့်မှကြွလာသောအခါ၊မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီး။ အသုံးပြုမှုအားလုံးလက်နက်တွေသင့်ရဲ့လက်နက်တိုက်တွင်:နေ့ဂိမ်း၊ညဂိမ်း၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ဘာသာစကားဖလှယ်ရေး၊စသည်တို့ကို။ ကိုယ့်အဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်အပေါ်မူတည်တစ်ခုတည်းစမ်းချောင်းများ၏ဝင်ငွေများ၏အသက်မွေးခြင်း၊ဒါဟာလည်းမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအပေါ်မူတည်၏စမ်းချောင်းနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံ ။ အထူးသဖြင့်ရှိပါတယ်သည့်အခါဤမျှလောက်များစွာသောလှပသောလူကနေရွေးချယ်ဖို့။ ဒီတိပြု၊သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမပါဝင်ပတ်သက်ရယူပါနှင့်အတူပထမဆုံးမက္ကဆီကန်မိန်းကလေးသင်တွေ့ဆုံရန်နိုင်လွန်နွဲ့(သို့သော်၊ဒါကြောင့်လည်းတုံ့ပြန်မှုကိုအောက်မေ့ထိုက်သူတို့လုပ်ကြီးမြတ်မိတ်ဆွေများကအကြောင်းအရာကိုဖွင့်လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်)။ ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းယခုမွသင်၏စိတ်ကူးတစ်ခုရရန်မည်သို့ မက္ကမိန်းကလေးများလျက်ရှိရိုက်နှက်။ လျှင်သင်အသစ်တစ်ခုကိုလက်တင်ယောက်ျားတစ်ယောက်၊ထို့နောက်မက္ကဝေးအားဖြင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွင်လက်တင်အမေရိကနှင့်အတူစတင်:အဆုံးမိန်းကလေးများအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံအတော်လေးလုံခြုံပြီးအလွယ်တကူ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံအတွက်လက်တင်အမေရိက၊ဒါပေမယ့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီအပေါ်အရှုံးမပေးမက္ကဆီကို၊ကိုလံဘီယာ၊ပီရူးနှင့်ဘရာဇီး၊ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်အကြံပေးပေးပါနိုင်ငံဒုတိယရှုထောင့်-ထိုမက္ကဆီကန်မိန်းကလေးသင်မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီး၊တူညီသောကြည့်ရှုအဖြစ်မက္ကစီကိုအတွက်။ နောက်ဖြစ်ဟန်သည်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ သင်ဝင်ရောက်ရန်အတွက်။ အဆိုပါစာမ်က္ႏွာ၌ဖွင့်လှစ်အသစ်သောပြတင်းပေါက်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြီးနောက်၊သင်ပိတ်ပြီးပြန်သွားရန်။.
ဆက်ဆံရေးသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူအချစ်၊နားလည်နိုင်။ သင်ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်အပေါ်ငွေလင်ပန်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြောင့်သူ့ကိုမှ၊သူသည်အရှုံးမပေးမည်မဟုတ်။ အနည်းဆုံး၊ကဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုလူများတို့အားအကြှနျုပျ၏အဆက္။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊မ၏နှစ်ခုအအမျိုးသမီးများအစဉ်အချိန်၊နှင့်ဘယ်တော့မှသိရသည်၍မည်သို့အချို့သောလူတို့သည်စီမံခန့်ခွဲပါ။ ဒါ့အပြင်၊အဘယ်သူမျှမငါ့အဆွေခင်ပွန်းရှိသည်၊ဒါပေမယ့်မဖြစ်သင့်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရလျှင်ကီနေသောမိုက်နှင့်ငါခြုံနိုင်ကငါ့လက်ချောင်းနှင့်ပြဇာတ်အဖြစ်အများကြီးဖြစ်ချင်တယ်။ အခါသင်ရှိသည်သောခံစားချက်သင်လျက်ရှိခေါင်းပုံဖြတ်၊သူတို့ထွက်ခွာမပါဘဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုနားလည်။ သစ္စာသည်အဘယ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးထင်၊အထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့အမေတွေ၊ဘယ်သူလး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မျှော်လင့်တူညီသောသစ္စာကနေကျွန်ုပ်တို့၏။
မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးနှင့်မေးလ်အမိန့်သတို့သမီးအတွက်ဒီဇိုင်းနေသောသူတို့အနက်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှင့်မေတ္တာပါဆက်ဆံရေးနှင့်အတူ တစ်ဦးသစ္စာရှိမှုအဖော်။ များစွာသောမက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများရယူရန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်မေးလ်အမိန့်သတို့သမီးဆိုဒ်များနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်ကိုရှာတွေ့၏နွေးထွေးသောမေတ္တာ၊ဂရုစိုက်နှင့်ပုလ်။ တက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းအားဖြင့်၊သူတို့အလေးအနက်ကြိုးစားရှာတွေ့မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ဖြစ်ကောင်းအတွက်မင်္ဂလာဆောင်၊ဒီရှာသည်မဟုတ်။ ဤမှောင်မိုက်သည်မျက်စိနှင့်ကောင်းကင်တမန်မတူကစားရန်-သူတို့အမှန်တကယ်ပွင့်လင်းစိတ်ထဲရှိသည်မဟုတ်ရှက်ကဟုအတိအကျအဘယ်အရာကိုသူတို့ချင်တယ်။ အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ဤထူးဆန်းသောနိုင်ငံအားမကြာခဏအသေးစားနှင့်လှပသောမွာင္ၿအသားနဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ဆံပင်၊နှင့်သူတို့ကြည့်ရှုမယုံနိုင်လောက်အောင်ၡမ်ားလျှင်သူတို့ဖြယ္ဒီပါးလွှာသို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းတ္အချို့ပ်ာ္ရႊင္ျဆစ်။ ခေတ်မီလူငယ်အမျိုးသမီးဂရုစိုက်ကြည့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ဣတ္၊ထိုသူတို့၏အများဆုံးဝတ်ဆင်မိတ်ကပ်၊ရောင်စုံနှင့်ခေတ်မှီလှနေစဉ်၊အချို့အတူဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ဝတ်ဖို့။ ဤအသိပညာကိုသူတို့ဘယ်လိုအစဉ်အမြဲကြည့်မှလာသူတို့၏မွေးရာ၏အတိမ်အနက်ဣတ္။ ျ စဉ်မက္ကစီကိုဆွဲဆောင်ခရီးအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊အမေရိကန်များ၏အားသာချက်အတွက်လူနေမှုရပ်ကွက်နှင့်အလွယ်တကူဖြတ်ကူး။ အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ဥပမာအားဖြင့်၊ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ရှာဖွေတွေ့ရှိသူမ၏မက္ကစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အနေနဲ့အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်၊ကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုများအတွက်သူမ၏အစည်းအဝေးအတွက်သူမ၏ဇာတိနိုင်ငံ။သောအခါရက်စွဲအပွင့်သို့တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မင်္ဂလာဆောင်အပေါ်ဖြစ်ကြ၏အမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေရိကန်အမျိုးသမီးရှိသည်လိမ့်မည်အဘယ်သူမျှမကပြဿနာကိုသူမ၏နောက်ကျောဆိုတော့သူမကိုနိုင်ငံ၊မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများ၏တည်ငြိမ်ကိုင္ရနိုင်ဇာသွားရောက်ရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။မက္ကသာအမျိုးသမီးတစ်ဦးလိုအပ်ဇာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကနေဒါ။ ဤအသက်ရှိ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများအဘယ်ကြောင့်တစ်ခုတည်းမင်းသမီးထံမှမက္ကဒါလူကြိုက်များနှင့်အတူအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါ။ ပေမယ့်မှောင်မိုက်တဲ့ဆံပင်အထီးကျန်ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လေ့ဆိတ်ဆိတ်နှင့်အမျိုး၊သူတို့တစ်ခါတစ်ရံအမြန်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်များနှင့်တက်ကြွသောအမူအခါလိုအပ်။ ဒါကြောင့်အံ့သြသွားလျှင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမြင်ဘယ်လိုသင့်ရဲ့နေ့စွဲသွား စဉ်းအနည်းငယ်ချွန်ထက်ဟာသ၊အရာအားလုံးအေးဆေးတည်ငြိမ်ဖြစ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွက်။ လူသိများအဘို့အသူတို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဂရုစိုက်င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်၊မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများမှာကျွမ်းကျင်သူများမှကြွလာသောအခါအဘို့အစောင့်ရှောက်သူတို့ရဲ့ကလေးများနှင့်၎င်းတို့၏ယောက်ျား။ အထိနှစ်ဆယ်ရာစု၊မက္ကစီကိုအကြီးအကျယ်ကျေးလက်၊နှင့်အမျိုးသမီးရဲ့အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်သည်များမိသားစုများနှင့်ဒေသခံလူမှုအသိုင်း။ သို့သော်၊နှစ်ကျော်၊ဇာတ်လမ်းကိုပြောင်းလဲသွားပြီ၊နှင့်အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဟုတ်မှန်၊အမျိုးသမီးကဲ့သို့ထွက်သွားနှင့်ပျော်စရာရှိသည်၊ဒါပေမဲ့သူတို့အလွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်ထိုကောင်းမွန်သောအပြုအမူ၏သူတို့ရဲ့ယောက်ျား။ ထိတ်လန်ပါဘူး၊ဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်မွိန္ေအာင္လုပ္ျအနည်းငယ်နှင့်အတူမြင်းတပ်၊ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်၊သင်အနိုင်ရမရတာထဲက နှင့် ။ နှင့်ဟုတ်ကဲ့၊မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးကြည့်စူပါၡမ်ား၊ဒါပေမယ့်မမျှော်လင့်ပါဘူးဒီအပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အအိပ်အလျင်အမြန်။ အခါသင်ယုံကြည်မှုအများရွေးချယ်မှုအတွက်၊ပုံမှန်မက္ကဒေါလှုပ်ရှားနေသည်ဦးခေါင်းအတွက်ထောင်။ နှင့်ဤသည်ကိုလည်းပုံမှန်အရာတစ်ခုအဘယ်သူသည်လက်ထပ်ရမီသူတို့သည်ကလေးများရှိသည်။ အခါသားသမီးရောက်လာသော၊သင့်ရဲ့မက္ကမယားပျော်ရွှင်လိမ့်မည် အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်းရံကြီးမားတဲ့မေတ္တာမိသားစု။ အဲဒီယုံနိုင်ငံသည်အဓိကအားဖြင့်တည်ရှိပြီးအပေါ်အမြောက်အမေရိကတိုက်၊အလတ်စားမှလာမယ့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊အများအပြားစဉ်းစားဖြစ်နိုင်ရန်မက္ကတစ်ဇာတိဗဟိုအမေရိက၏။ နှင့်အတူ၎င်း၏နာမကို၊ရွးေဟာင္း ပျက်အစီးများ၊တောင်များ၊သဲကန္တာရနှင့်တော၊အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဆင်ခြင်အန္တရာယ်နှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုဤလှပသောနိုင်ငံ။ အားဖြင့်ခွဲအလယ်ပိုင်းအမေရိကအနေဖြင့်ပြည်ထောင်စုနှင့်ခွဲကိုပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှမက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့နှင့်ကာရစ်ဘီယံ၊မက္ကစီကိုတကယ့်ခရီးစ။ အဇာဥပဒေများအဝင်မက္ကဆီကိုဒီဇိုင်းလူတိုင်းအတွက်၊တိုင်းပြည်အ အားလုံး။ သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်လာအနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့၊နေအတွက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်၊သို့မဟုတ်အပင်အနေအတွက်နေအိမ်သို့များအတွက်အနည်းငယ်၊လ၊နှစ်။ တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ခြင်း၏င္ငံျခားအဘို့အရှာဖွေနေမက္ကသတို့သမီးကိုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာထိုင္လို။ ဒါအခါမကြွရှာဖွေနေသင့်ရဲ့မက္ကသတို့သမီး၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အအံ့သြဖွယ်အုပ်စု ဖော်ရွေပြီးလူမှုပြည်မှသောသူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်စိတ်ဝင်စားဖို့ပုံပြင်များရှိသည်ကိုပြောပြပါ။ လူအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်ကနေအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပြရန်အလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားအတွက်ချိန်းတွေ့တစ်ခုတည်းသောလက်တင်အမေရိကန်အမျိုးသမီး။ အားဖြင့်စိတ်ဝင်စားသောအတွေးများ၏အစည်းအဝေးနှင့်အသုံးစရိတ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို၏ကျန်နှင့်အတူအလွအမျိုးသမီးမှဤဒေသအချို့၏ဤလူတို့လည်းဆိုတော့အတွက်စိတ်ဝင်စားပါပဲ။ အစည်းအဝေးနှင့်အတူဤကောင်းကင်တမန်ဆက်အသွယ်သို့ရောက်လာ၏ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူမက္ကဆီကန်အလှအပ။ အတွက်ကြီးမားတဲ့မြို့မြို့၊သူတို့ခေတ်၊စမတ်ဖုန်းများ၊နှင့်ဖန်ဆင်းသောသူအမျိုးသမီးများမကြာခဏ"။"သော်လည်းအသက်တမ်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အတွက်အသုံးပြုဒဏ်ထုံးစံအားဖြင့်အခြားမက္ကလန္ကရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် င်းတို့၏မြို့တော်မက္ကဆီကို၊အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအဘို့ရှာကြသည်လျှင်အလွန်ကြီးစွာသောအမျိုးသမီး၊မက္ကစီကိုမှစ။၊ထိုအခါသင်ကျိန်းသေချင်ပါမှာကြည့်ရှုယူဤတောက်ပသောနဲ့လှပတဲ့ ။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်သည်လည်းရှာမက္ကသတို့သမီးကနေငတ်သောသူအားဖြင့်အမိန့်။ ရှိခြင်းခိုင်ဒေသခံမြစ်များ၊အဲဒီအမျိုးသမီးမ သူတို့ထုတ်ဖေါ်အ နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ၏အ အစ်မ၊ဒါပေမယ့်သို့ရာတွင်ပေက္ခာနှင့်ယှဉ်သောမိသားစုနဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားစံတန်ဖိုးများနှင့်အညီ၊သင်တန်း၊ကြီးမြတ်လှ၊မကြာခဏမှဆင်းသက်လာယာနှင့်အင်ကာဘိုး။ သူမ၏နှလုံးအနိုင်ရနှင့်ချစ်ခြင်းအဘို့အအမျိုးသမီးနှင့်သူမတစ်ဦး၊သူမအနိုင်ရရမယ်သူမယုံကြည်ကြကုန်အံ့အဖြစ်လူသိများသောသူမသည်တန်ဖိုးထားသည်နှင့်သူမ၏အခြားအရည်အသွေးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်သူမ၏အလှ။ သတိရ၊ဒီကမဖြစ်။ ဤအကြောင်းပြချက်အဘို့၊ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ရင်သူမစိတ်ဝင်စား၊မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အတိုက်သတို့သမီးသူမ၏ပြပါလိမ့်မယ်ခံစားချက်နှင့်အတူကောင်းတစ်ဦး၏နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်အပေါ်ရွေ့လျားမယ့်နေ့စွဲကို၊ဥပမာအားဖြင့်၊အားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်သူမညစာစားတဲ့အခါရှိဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်။ သင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူ၊သိသင်၏မယားအဖြစ်တစ်အံ့သြဖွယ်အတွေ့န်ဆောင်မှု၊နှင့်အချိန်ကျော်သင်တို့သည်နားလည်ကြလိမ့်မည်လျှင်သူမသည်လက်ျာလူတစ်ဦးအတွက်အမြဲတမ်းဆက်ဆံရေး။ သံသယကမက္ကဆီကန်အမျိုးသမီး။ ဒါဟာအရေးမပါဘူး၊သင်အထိလူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်မှအခြားယဉ်ကျေးမှု။ ဥပမာအားဖြင့်၊မိန်းကလေးများမှဗင်နီဇွဲ၊က်ဴးဘား၊နှင့်အမျိုးသမီးအားလုံးမှလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများသည်။.
ကစားတဲ့စကားပြော-အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊စလစ်တွေအများကြီးများအတွက်မိန်းကလေးငယ်များ၊ကမ္ဘာ့အမွေအ။ အက္ပ္ကိုချက်တင် ၂၀၀။ ၀၀၀ အသုံးပြုသူများအတွက်အက္ပ္ကိုကစားတဲ့စကားပြော ဆင်ပြေဘာသာစကားဆက်သွယ်ရေးစကားပြောထက်ပိုပြီး ၅၀ ဘာသာစကားစွမ်းရည်ဇာတိပျင်းနေတယ်ဆိုရင်သင်အိမ်မှာသို့မဟုတ်ဝေးလံခေါင်နာမည်ဖြင့်ဗီဒီယိုချတ်ပီ၊ေလ့လာဘန်းစကားနားထောင်ဖို့ စကားပြောဆို၊သင်ရှိသည်ရွေးချယ်မှု၏စာသားလျှင်၊စာသားအလိုအေလ်ာက္နားမရှည်လျားဖေါ်ပြချက်ပြောင်းအခြားခလုတ်ကိုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ ကြောင့်အရှက်လူလို၊လူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့။ ကိုယ့်အားထုတ်မှုစေနှင့်နှိပ်ပါ"စတင်"ခလုတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ကိုယ့်အကိုကလစ်နှိပ်ပါခလုတ်ကို။ အတွက်၊သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေနေသောရယ်စရာ၊စေနိုင်တယ်နှင့်အပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်၊သင်ပင်အဖြစ်ဆောင်ရွက့်။ သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါမိန်းကလေးများအပေါင်းတို့၏အသက်အရွယ်။
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနေစဉ်ေ ချက်တွေလဲအများကြီးနဲ့တူ၊လှိုင်း၊အသုံးပြုခွင့်ရှိခြင်းလူမှုမီဒီယာအကောင့်အသစ်များ၏၊အကြောင်းကိုသိကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များစသည်တို့ကို။ အဓိကမျိုးဆက်လည်ပတ်သောအင်တာနက်အများစုကဒီရက်တွေကဆယ်ကျော်သက်။ လျှင်သင်မြင်ရမှာ၊လူတိုင်းကဤသည်နေ့ရက်ကာလသည်အပေါ်လူမှုမီဒီယာနှင့်အလုပ်လုပ်ကြောင့်နီးပါးနေ့စဉ်အပေါ်အခြေခံ။ ဖြစ်ခြင်းလူမှုရေးဖြစ်လာသည်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့။ ဒါ့အပြင်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြကြောင်းစကားပြောပြီးဆက်သွယ်နှင့်အတူအခြားလူများအဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်လူ့ရှင်သန်မှု။ လူသားလိုအပ်ထောက်ခံမှုနှင့်ချစ်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့အတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အရပ်ရဲ့အလိုကိုလူမှုရေးပ။ အွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုဒ်များတစ်နေရာတည်းရှိရာမှရလူမှုရေးနှင့်ပြောတတ်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူလူ။ ရှိပါတယ်အွန်လိုင်းဆိုက်များရှိရာသင်ချက်တင်အားဖြင့်တစ်ဦးကမ်ပြောပြဖို့လူတဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု။ ခံစားမိသူရှက်ပြောဖို့အတွက်လူအစစ်အမှန်နှင့်အမြန်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအလွယ်တကူအားသာချက်ယူခမဲ့ဝဘ်ဖစ္သျဆိုဒ်များတိုးမြှင့်အတွက်သူတို့၏ယုံကြည်မှုနှင့်ဖြစ်လာလူမှုရေးတက်ကြွ။ ဒါဟာအတွက်ကူညီပေးသည် တိုးမြှင်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အထွက်အကောင်းဆုံးအတွက်သူ့ကိုမရှိရင်သူ့ကိုရန်ရှိခြင်းကွုံတှေ့မဆိုရှက်စရာအချိန်လေးနှင့်ရှိနေပါတယ်။ လူတွေအများကြီးရထိတွေ့မှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းဝဘ်ဖစ္သျဆိုဒ်များအဖြစ်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအဝှမ်းပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်အွန်လိုင်းဝဘ်ဖစ္သျ။။။။ေ ရရှိအများကြီးထိတွေ့မှုကြောင့်ပြင့္လင္းျမင္သာ၏။ နိုင်ချက်၏အားသာချက်ယူဤကဲ့သို့သောနှင့်မြှင့်တင်ရန်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသို့မဟုတ်ပျော်စရာရှိသည်။ ပြောနေတာမှတစ်စုံတစ်ဦးကမသိနိုင်တခါတရံတွင်အလွန်အစိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ဘယ်သူနဲ့စကားပြောလူအွန်လိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လွယ်ကူပေမယ့်အွန်လိုင်းစကားပြောဖစ္သျဆိုဒ်များရှိပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်ငါတို့အဘို့အ။
Dul ar líne Meicsiceo, ar líneaDhátú, Meicsiceo ag Dul Grianghraif Meicsiceo
ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု ဗီဒီယိုစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူမရှိဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ နှစ် ဗီဒီယိုစကားပြောွ အခမဲ့ဗီဒီယိုကျွမ်းမပါဘဲမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ချက်တင်ကစားတဲ့မှအွန်လိုင်းသင်သည်သင်၏ဖုန်းအခမဲ့ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်း ဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးမိတ်ဆက် ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအခမဲ့